TAG ထားတယ်ဗျို့: 2009
ကျေးဇူးပြု၍ စာအရင်ပြီးအောင်ဖတ်ပြီးမှ သီချင်းလေးဖွင့်နားထောင်ကြပါနော်။ တော်ကြာ မထင်မှတ်ပဲ အသံကြားရင် လန့်သွားနိုင်လို့ပါ။ :D
ကျမ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က မောင်ငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ Tag Post လေးကိုရေးပေးဖို့ Tag ခံရပါတယ်ရှင်။ ဒီတခါ Tag post က လက်နဲ့ ရေးရုံမဟုတ်ပဲ ပါးစပ်နဲ့ပါဆိုရမှာပါတဲ့ရှင်။ ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံ.. တော်တော်ဆိုးတဲ့ကလေး.. ကိုယ့်အစ်မကြီးကို မညှာမတာ ၊ သူဟာသူ ကောင်မလေးတွေ ( ညီမလေးတွေ)ကို Tag ရမှာကြောက်တိုင်းနဲ့ ကိုယ့်အစ်မအပေါ် ဘိုကျတာလေ။ တကယ်တော့ သူက အသံသိတ်ကောင်းတော့ အသံကောင်းကြောင်းကြွားချင်တာလေ..အဟားး နာသိသားပဲ ။ :P အစ်မဖြစ်သူက ဓါတ်ပုံတွေတင်ပေးလဲ သူတို့ မှာဖြင့် မစွန်နိုင်ကြတော့ " တားတာကရုပ်မလှပေမယ့် အသံလေးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာ" ဆိုပြီးကြော်ငြာချင်တာလဲပါတယ်လေ။ အသံကတော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်ရှင်။ L လွန်းဝါ ထိုင်ငိုရလောက်အောင် Feel အပြည့်နဲ့ဆိုထားတာလေ။ ဘာတဲ့
" ပြန်မလာတော့ဘူး.......... " ဆိုလား။ ပြန်လာလုိ့လဲဘယ်ရမှာတုန်း သူ့မှာရည်းစားမှ မရှိတာလေ။ အဟေး ( မှတ်ပြီလား.. နာ့ကို သီချင်းဆိုခိုင်းဦး) ။
အလကား စ တာပါ မောင်ခြေခြင်းချိတ်ရာရေ.. အဲ..အဲ.. မောင်ချစ်ခြင်းခြေရာရေ။ မောင်လေးက သီချင်းဆိုတာအဆိုပိုင်သလို ၊ အသံလေးကလဲ အလွန်ကောင်းပါတယ်ကွယ်။ ဒီလိုလုပ်လေ... ဆရာဝန်မလုပ်ပဲ အဆိုတော်လုပ်ရင် ကြီးပွားနိုင်တယ်။ ဖြူဖြူကျော်သိန်း လိုပေါ့။ :P ခြေခြင်းချိတ်ရာဆိုပြီး ဇီးသီးပဲ ထုတ်တော့ ..ဟဟားးး ( ကဲ.. မှတ်ပြီလား.. နာ့ကို ဒုက္ခပေးတာ နာနာပြန်တွယ်ထားတယ်။) :P
ဒီမှာဖြင့် သူ့တက်ဂ်ပို့စ်တင်နိုင်ဘို့ မစားနိုင်၊ မသောက်နိုင် ၊ တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည်လေး ဆက်ရေးဘို့တောင် မုဒ်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိလို့ ဆားတွေချက်နေလိုက်ပြီး သီချင်းဆိုလေ့ကျင့်နေရတာ ၊ ဘယ်လိုဆိုဆို အဆင်မပြေ ၊ ဟေမာနေ၀င်း တွေရော၊ မီမီဝင်းဖေ တွေရော ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်တွေရော ၊ ရတနာဦးတွေရော ချောစုခင်တွေရော အစုံ လေ့ကျင့်ရ ၊ရှာရ. လုံးဝ အဆင်မပြေ ...နောက်ဆုံးတော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူး .. အဲ့ဒီအကြွေးမကျေမချင်း stress ရနေပြီ ၊ မြန်မြန်ပြီးအေးရော လို့ သဘောထားပြီး လွန်ခဲ့တဲ့၁၂နှစ်က ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲ ဆိုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ရှင်။ သီချင်းလေးက အမျိုးသမီးတေးသံရှင်ချိုပြုံး ဆိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဆိုက်မှာ ချိုပြုံးသီချင်းကမရှိပဲ အမျိုးသားအဆိုရှင် ရန်အောင်ဆိုထားတာပဲရှိနေတာမို့ ကီးမြင့်မြင့်ကိုပဲ ရသလောက်လေး ၊ ဆိုတတ်သလိုလေး ဆိုထားလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ :D
သီချင်းကို ၅ ခါလောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကီးကိုက်ရင် အသံမငြိမ်ပါဘူးရှင်၊ အဲဒီလိုဆိုတော့ ကီးမကိုက်တော့ အသံငြိမ်လားဆိုတော့ ..ဟီးဟီး အသံတုန်ပါတယ်ရှင်။ တစ်ခုမှ မကောင်းတဲ့အသံသွင်းထားမှုတွေထဲက အတန်အသင့် အဆင်ပြေမယ်ထင်တာလေးကိုပဲ Tag post လေးပြီးသွားအောင် တင်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ :D
ဟဲ..ဟဲ..ရန်အောင်မျက်နှာကြီးနဲ့ မီးမီးဆိုတာပေါ့။ :P
နားထောင်အားပေးသွားကြပါဦးနော်။ :D :D
ဟုတ်ကဲ့..သည်းခံပြီးနားထောင်ပေးသွားလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ :P
မောင်ငယ်ချစ်ခြင်းခြေရာလေးရဲ့ အသံက အလွန်ကောင်းပါတယ်ရှင် ဒီမှာသွားလည်ပြီး အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်။ ( မောင်လေး.. အစ်မ ကြော်ငြာလဲဝင်ပေးတယ်နော်. စိတ်မဆိုးနဲ့ ။ ) :P
ကဲ..ကျမလဲ ခေါင်းတော်တော်စားသွားတယ်။သီချင်းမဆိုတာ စဉ်ပေါ်မတက်တာကြာပြီလေ။ အဟဲ..:P :P စဉ်ပေါ်တက်ဖူးလို့လားဆိုတော့ တက်ဖူးပါတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့နော်။ :D တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်က စဉ်ပေါ်တက်ပြီး “ဟေမာနေ၀င်းရဲ့ မောင်” ကိုဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ :P
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ အခုသီချင်းလေးဖြစ်တဲ့ “တိမ်လွှာမို့မို့လွင်”ကို ဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ နောက်ပြီးရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ၊ မောင်နဲ့တွဲပြီး “ပထမဆုံးနေ့” သီချင်းကိုဆိုပြီး လူနာတွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဟီးးး ( လူနာတွေက သီချင်းနားထောင်ပြီး အိပ်ပျော်ကုန်ရော၊ အဲဒီလောက်ကောင်းခဲ့တာ ၊ အဟေး !;;! )။ ပြောပြရဦးမယ် ကြုံတုန်းနော်. ကျမကသာအသံမကောင်းတာ ၊မောင်က ဆို၊က၊ရေး၊တီး တိုင်းအဆင့်မှာ သီချင်းကြီးနဲ့ ဒုတိယဆု ရခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျွန်း ကျွန်း ပိုင် သ သီချင်းနဲ့လေ။ :P
လူရယ်လို့ စတင်ခဲ့ကတည်းက ငါတို့အချစ်ကိုရခဲ့တယ်...
အူဝဲလို့ စူးစူးလေးအော်သံကိုကြားတော့ မွေးခန်းအပြင်က ဖေဖေကစချစ်တယ်
မျက်လုံးလေးပိတ်ပြီး နီတာရဲလေးဘ၀နဲ့ မေမေ့အနား ဆရာမကချပေးလိုက်တော့ မေမေကချစ်ပြန်တယ်
အချိုးအစားမကျ လိုအပ်တာတွေကို ကြည့်ရှု့ပြီး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဘွားဘွားတွေက လက်ကမချချစ်ကြပြန်တယ်
မချီတက်ချီတက်နဲ့ ခလေးငယ်ငယ် ဘယ်နားဘယ်လိုကိုင်ရမယ် မသိပေမဲ့ ဘိုးဘိုးတွေက ချစ်ကြချီကြပြန်တယ်
နာမည်ပေးဖို့ တစ်ယောက်တစ်ခွန်း စကားရည်လုနေတတ်တဲ့ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်တွေကလည်း ချစ်တာပဲ
မပီစကားစဆိုတော့လည်း လူကြီးတွေက ချစ်ကြတာပဲ.... ကျောင်းကဆရာမှ နပ်တွဲလောင်းလေးကို ပြုစုယုယရင်း
အချစ်တွေပေးကြပါတယ်...အရွယ်ရောက်တော့လည်း ချစ်သူက ချစ်တာပဲ.... အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်း ရင်းရင်းနှီးနှီးနောက်ကြပြောင်ကြ ချစ်ကြ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ပေ့ါ...............ဒီတော့ ငါတို့ကလည်းချစ်တတ်၇မယ်....ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းချစ်ရမယ် တိုင်းပြည်ကိုလည်းချစ်ရမယ် ....ငါတို့လူမျိုးတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်လေ..... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူဆိုတာ ချစ်ဖို့မွေးလာတာမို့ပါ
"ကမ္ဘာပျက်ခါနီး တစ်လလောက်အလို" တဲ့ မအိန္ဒြာက တက်ဂ်လာတဲ့အတွက် တက်ဂ်ပို့စ်လေးကိုရေးဘို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်ရှင်။
ဒီနေ့ပဲသေမလား၊ မနက်ဖြန်သေမလား ၊ဘယ်တော့သေမလဲဆိုတာသေခြာမသိနိုင်ကြတဲ့ သတ္တ၀ါတွေအားလုံးအတွက် နောက်တစ်လကြာရင် ကမ္ဘာကြီးတကယ်ပျက်တော့မယ်ဆိုတာ ကြားလိုက်ရရင် ဘယ်လိုအတွေးတွေနဲ့ ခံစားသွားကြမလဲဆိုတာလေးကို မအိန္ဒြာက သိချင်လို့ ဘလော့ဂ်ဂါမောင်နှမများစွာကို တက်ဂ်ခဲ့ပါတယ်။
လူဆိုတာမွေးဖွားခြင်းနောက်မှာ သေဆုံးခြင်းဆိုတာကပ်ပါလာပြီးသားမို့ သေရမှာကို ကျွန်မ မကြောက်ပေမယ့် ဥပစ္ဆေဒကကံနဲ့ သေရမှာကိုတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်မကြောက်ခဲ့မိပါတယ်။၀ုန်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးသေတာမျိုး တကယ်သဘောကျပါတယ်။ဝေဒနာကြီးကို တမြေ့မြေ့ခံစားနေရပြီးမှ သေရမှာကိုတော့ ကျွန်မကြောက်ခဲ့မိတာလေ။ဒါပေမယ့်လေ လူဆိုတာ ကံစီမံရာအတိုင်းလို့ပဲပြောရမလား သူ့ကံကြမ္မာ ၊ သူ့ဘ၀ပေးကုသိုလ်လို့ပဲပြောရမလား ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်ပြီး ၊ပျက်ချိန်တန်ပျက်ကြဘို့ရာ အကြောင်းကံတွေပါလာပြီးသားပေမို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လာခြင်တဲ့သေခြင်းတရားလာ ၊ငါအသေတတ်အောင်ကြိုပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အသေတတ်သွားရင် မနက်ဖြန်သေမယ်လို့ကြိုသိရင်လည်း သေတတ်သွားမှာပါ။နောက်တစ်လမှသေမယ်ဆိုရင်လည်း သေခြင်းတရားကြီးကို သတ္တိရှိရှိပဲ ရင်ဆိုင်ရဲသွားကြမှာပါ။ဒီသေခြင်းတရားအကြောင်းလေးဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာပျက်ခါနီး တစ်လအလို ပို့စ်လေးနဲ့ပတ်သက်နေလို့ ကျွန်မဖတ်ဖူးတဲ့ ဆရာတော်ဦးဇောတိက( မဟာမြိုင်တောရ)ရဲ့ သေခြင်းတရား(၁) ဓမ္မစာပေလေးကို စာဖတ်သူမောင်နှမများ ဖတ်ရလေအောင် အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာဘလော့ဂ်လေးမှာ မျှဝေပေးထားပါတယ်ရှင်။
မအိန္ဒြာမေးတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေတော့မယ်နော်....
ကျွန်မရဲ့မိသားစု ၊မိဘဆွေမျိုး မောင်နှမတွေနဲ့အတူ ရှိနေခြင်ပါတယ်။အင်း.. ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေပါ အနားမှာရှိနေကြရင် ပိုအားရှိမယ်ထင်ရဲ့. ( တူတူသေကြမယ်လေ.နော်. )း)))
သေမှာကို မကြောက်ပေမယ့် ဘယ်လိုဘယ်ပုံသေရမယ်ဆိုတာ မသိရလေတော့ ကြောက်တတ်တဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့ ကြောက်နေမိမှာတော့သေခြာပါတယ်။ဒီကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကြီးက ကမ္ဘာမြေကို (၂၁)ရာစု အစောပိုင်းမှာ ကြီးမားလှတဲ့ ဂြိုဟ်အပိုင်းအစကြီးတစ်ခု တိုက်ရိုက်ထိမှန်မယ် (ဒါမှမဟုတ်) ကမ္ဘာနားက ကပ်ပြီးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အခြေခံပြီး လူပြောများလာတာပါ။အဲဒီလို ဂြိုလ်အပိုင်းအစကြီး တိုက်ရိုက်ထိမှန်ပြီး မျက်လှည့်ပြသလိုပဲ ၀ုန်းဒိုင်းဆိုပြီး ကမ္ဘာကြီးပြာကျသွားခဲ့ရင်တော့လည်း တော်တော်ကောင်းမှာပဲ ၊ မသေမရှင်ဖြစ်နေကြရင်တော့ ကယ်ဆယ်မယ့်သူမရှိနဲ့ တော်တော်ဝဋ်ကြွေးဒုက္ခတွေ ခံစားကြရမှာပဲလို့ တွေးမိနေမှာသေခြာပါတယ်။
ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတွေကို အသုံးချရင်း အသေတတ်အောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါမယ်။
ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်တော့ ၀မ်းနည်းမိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သမီးလေးအတွက်တော့ ၀မ်းနည်းမိမှာသေခြာပါတယ်။တကယ်ကြီး အဲလိုသာသေကြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် သမီးလေးကို ရင်ထဲမှာထွေးပိုက်ပြီး အတူတူသေဆုံးမိမလားမသိဘူး။သြော်..သမီးလေး တစ်ယောက်တည်းအသက်ရှင်ကျန်နေခဲ့ရင်လည်း တော်တော်ဒုက္ခရောက်ရှာမှာလို့ တွေးတောဝမ်းနည်းစိတ်ပူနေမိမလား မသိပါဘူးနော်။
မသေမရှင် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရမှာကို ကြောက်တယ်။
သတိတရား.. (ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းကို အာရုံရသလောက်အမြဲမှတ်နေနိုင်တဲ့ သတိတရားလေး လက်ကိုင်ဆောင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေမိမယ် ထင်ပါတယ်။ )
ဘာမှရေးဘို့တော့ စဉ်းစားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လူဆိုတာ တစ်နေ့မုချသေကြရမှာပဲလေ.. ဘယ်လိုသေကြမလဲ.. ဂြိုလ်ကြီးကပဲ ကမ္ဘာကြီးပေါ် ၀ုန်းဆိုပိကျပြီး ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ အသက်ရှင်နေတဲ့ သတ္တ၀ါတွေအားလုံး ဖြစ်နေရာကနေ ပျက်သွားကြမလား.....
ဒါမှမဟုတ် ဂြိုလ်အခြမ်းပဲ့ကြီးက ကမ္ဘာတခြမ်းကိုပဲ တိုက်ရိုက်ထိမှန်သွားခဲ့ရင် ကံကောင်းတဲ့သူတွေ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နေကြဦးမှာလား..
ငါလုပ်ခွင့်ရတဲ့ ကုသိုလ်တရားတွေ ၊ အလှူဒါနတွေ တတ်နိုင်သလောက် ငါ့ချွေးနဲစာနဲ့ ပြုခဲ့ဘူးတယ်။ငါကိုယ်တိုင် အလှူတွေ လှူခွင့်ရသလို ၊သူတစ်ပါးတွေလှူနိုင်အောင်လည်း ငါကြိုးစားတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးတယ်.. မိဘကျေးဇူးတွေ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး ဆပ်ခဲ့ရတယ်.. ဆိုပြီး ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မဖြေသိမ့် ဂုဏ်ယူနေမိမယ် ထင်ပါတယ်....
သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလို့ ကျွန်မတို့တွေ လှူဒါဏ်းခွင့် ၊ ပူဇော်ခွင့် ၊ ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်ခွင့်တွေ ရရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့် အပယ်မလားလောက်ဖူး ထင်ပါတယ်။း)))
“ ငါလုပ်ချင်တာတွေ အမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ ရပြီ။ အများကြီးလုပ်ခဲ့ ရပြီ ။သေပျော်ပါတယ်”
၁.အဖြူရောင်မေတ္တာ ( ရေးပြီး)
၂..အလှတရား ( ရေးပြီး)
၃..တောသားလေး ( ရေးပြီး)
၆..ရွာသားလေး ( ရေးပြီး)
ဒီတက်ဂ်ပို့စ်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာကြီးတကယ်ပျက်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေဆိုပြီး မောင်လေးမင်းလင်္ကာမှ Forward Mail ပို့ပေးလာခဲ့တဲ့အတွက် မောင်နှမများဖတ်ရလေအောင် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပျက်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ
Posted on Oct 23 09 - 05:19 PM Hits : 3558 Save as PDF
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် ကမ္ဘာတလွှားက အင်တာနက် သုံးစွဲသူတွေဆီကို Forward Mailအနေနဲ့ ပျံနှံ့ရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ မေးခွန်းကတော “၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပျက်မှာလား”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ နီဘီရူယှဉ်တွဲမှုဖြစ်ရပ် (Nibiru Collision)လို့ ခေါ်ကြတဲ့ အဲဒီကိစ္စဟာ တကယ်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ NASA (အမေရိကန် အမျိုးသား အာကာသ အေဂျင်စီ)က ပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ နီဘီရူကိစ္စဟာ ကြီးမားလှတဲ့ ဂြိုဟ်အပိုင်းအစကြီးတစ်ခု ကမ္ဘာမြေကို (၂၁)ရာစု အစောပိုင်းမှာ တိုက်ရိုက်ထိမှန်မယ် (ဒါမှမဟုတ်) ကမ္ဘာနားက ကပ်ပြီးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အခြေခံပြီး လူပြောများလာတာပါ။ ဒီအကြောင်းကို (၁၉၉၅)ခုနှစ်က zetatalk၀က်ဘ်ဆိုက် တည်ထောင်သူ အမျိုးသမီး နန်စီလေဒါက စပြီးတော့ ဖော်ထုတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်စီဟာ သူ့ကိုယ်သူ စိတ်ဝိဥာဉ် ပေါင်းကူးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ကြေညာထားပြီး Zeta Reticuli ကြယ်စင်ကြီးက တခြားသက်ရှိတွေနဲ့ စိတ်ချင်းစကားပြောနိုင်တယ်လို့ ဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ပထမဆုံး မေလ(၂၀၀၃)ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာရှိတဲ့ နေစကြာဝဠာ တစ်ခုလုံး ပျက်သုဉ်းတော့မယ်လို့ သူ့ကိုမိတ်ဆွေဂြိုဟ်သားတွေက အသိပေးတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တကယ်တမ်း ကမ္ဘာပျက်မှာ (၂၀၁၀)ခုနှစ်ဝန်းကျင်လို့ ပြောင်းပြီးပြောပြန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၀င်ရိုးစွန်းနေရာ ရွေ့သွားတာကြောင့်မို့လို့ပါဆိုပြီး နန်စီက ပြောခဲ့သလို အဲဒီနောက်မှာတော့ လူသားမျိုးပြုတ်မယ့် ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီး ကြုံတွေ့မယ့် ကမ္ဘာပျက်သောနေ့ (Doomsday)ကို ကြုံရတော့မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအတွေးအခေါ်အရ ကမ္ဘာနဲ့ရွယ်တူလောက်ရှိတဲ့ ဂြိုဟ်ပဲ့ကြီးတစ်ခုဟာ (၂၀၁၂)ခုနှစ်လောက်မှာ လူသားတွေနေတဲ့ ကမ္ဘာကို ဦးတည်ရောက်ရှိလာမှာပါတဲ့။ တိုက်ရိုက်တိုက်မိခဲ့ရင် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်သလို ကပ်ပြီးဖြတ်သွားရင်တောင် အရှိန်ပြင်းလွန်းတာကြောင့် လူသားမျိုးနွယ် ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းလုနီးပါး ဖြစ်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နန်စီရဲ့ လက်တွေ့မကျတဲ့ အယူအဆဟာ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး အဖွဲ့တွေရဲ့ ၀ါဒဖြန့်မှုနဲ့အတူ ကြီးထွားလာပြီး “(၂၀၁၂)မှာ ကမ္ဘာပျက်မှာလား”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို လူပြောများလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ အဲဒီဖြစ်ရပ်ကြီးကို Code Nameအနေနဲ့ ပေးထားတဲ့ နီဘီရူဆိုတာ ရှေးဟောင်း ဘေဘီလုံ လူမျိုးစုတွေရဲ့ နက္ခဗေဒ ပညာရပ်ထဲက ဆိုးရွားကြမ်းကြုတ်တဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုရဲ့နာမည်ကို မှည့်ခေါ်ထားတာပါ။ နောက်ပြီးတော့ “ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အလွန်”လို့လည်း အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိ ခန့်မှန်းအတွေးအခေါ်တွေအရ Xဂြိုဟ် (ဒါမှမဟုတ်) နီဘီရူလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ စကြာဝဠာ ဂြိုဟ်ပဲ့ကြီးတစ်လုံးဟာ ကမ္ဘာကို (၂၀၁၂)ခုနှစ်မှာ တိုက်ရိုက်ဝင်တိုက်တော့မှာလို့ ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။
NASAရဲ့ ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ်မော်ရစ်ဆန်ကတော့ ဒီကိစ္စကို ရယ်စရာ အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်ကောင်းတစ်ခုလို့ ယူဆထားတာပါ။ “နီဘီရူဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်တွေ့လေ့လာမှုထဲမှာ လုံးဝမရှိတဲ့အရာဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိဖို့တော့ လိုမှာပါ”လို့ မော်ရစ်ဆန်က Washington Post သတင်းစာကြီးနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားပါတယ်။ (၂၀၁၂)ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာနဲ့ Xဂြိုဟ်ဝင်တိုက်လို့ ကမ္ဘာကြီး ပျက်တော့မယ်ဆိုတာဟာ လူ့သမိုင်းခေတ်သစ်တစ်ခုကို စတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားကောင်းကောင်း ရိုက်ချင်နေတဲ့ ဟောလီးဝုဒ် ကုမ္ပဏီတွေအတွက် အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုထက် ဘာမှမပိုဘူးလို့ မော်ရစ်ဆန်က ဆိုပါတယ်။ ရှေးဟောင်းဆူမားရီးယန်း မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာ Zenchriaဆိုတဲ့ ခေတ်တစ်ခုတုန်းက နီဘီရူဆိုတဲ့ ကြယ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်း မှတ်တမ်းကလွဲပြီး သမိုင်းတလျှောက် ဘယ်သူမှ နီဘီရူဆိုတဲ့ စကြာဝဠာထဲက ဂြိုဟ်ပဲ့ကြီးအကြောင်း ပြောခဲ့၊ ရေးခဲ့တာ မရှိပါဘူး။ တကယ်တော့ဒါဟာ လူ့သမိုင်းကို အခြေခံ ခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်ကြံထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းသာဖြစ်ပါတယ်လို့ မော်ရစ်ဆန်က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မာယာလူမျိုးစုတွေရဲ့ ကာလရှည်ကြာ ပြက္ခဒိန်ကလည်း (၂၀၁၂)ခုနှစ် ကျရောက်တဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်းလေးတစ်ခု ဖန်တီးထားခဲ့တာကလည်း ရှိနေတာမို့ပါ။
မာယာတွေ ယုံကြည်ထားတာအရ Batun 13ဆိုတဲ့ အချိန်ယန္တယားစက်ဝိုင်း ကုန်ဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ (၂၀၁၂)ခုနှစ်လောက် ကာလမှာ Batun 14ဆိုတဲ့ အချိန်စက်ဝိုင်း နောက်တစ်ခု စပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာတစ်ခါပျက်မယ်လို့ ဆိုထားတာကိုး။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ (၂၀၁၂)ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်အာကာသ တိုက်ခိုက်မှုမှ ရောက်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အာမခံထားပါတယ်။ ကမ္ဘာပျက်မယ့်နေ့ကို အတိအကျ မသိနိုင်ပေမယ့် (၂၀၁၂)ခုနှစ်ထိတော့ ကမ္ဘာဟာ အကောင်းအတိုင်း ရှိနေမှာပါ။ တကယ်တော့ အရင်ကလည်း ခုလိုမျိုး ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ကောလဟာလတွေ ရှိခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေ အများကြီးပါ။ ထင်ထင်ရှားရှား တစ်ခုအနေနဲ့ အက်ပေါ့ဟစ် (Apophis)ဆိုတဲ့ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားကြီး တစ်ခုဟာ ကမ္ဘာနားက (၂၀၂၉)၊ (၂၀၃၆)နဲ့ (၂၀၆၈)ခုနှစ်တွေမှာ (၃)ခါဖြတ်သွားပြီး အဲဒီအချိန်ကျရင် လူတွေသောက်သောက်လဲ သေကြမယ်လို့ သတင်းကြီးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းတာမှုတွေအရ အဲဒီဂြိုဟ်သိမ်ကြီး ကမ္ဘာနားက ဖြတ်သွားချိန်မှာ အနည်းဆုံး မိုင်(၁၈၀၀၀)လောက် ဝေးနေမှာဖြစ်ပြီး ဒါဟာလုံးဝလုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့ အကွာအဝေးပါလို့ ပညာရှင်တွေက အတိအလင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောကြားထားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် (၂၀၂၉)ခုနှစ်နား နီးလာရင် “အက်ပေါ့ဟစ်ကြီး ကမ္ဘာကို ၀င်တိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”ဆိုတာ တွေ့ရကြုံရ၊ ဗျာများရအုံးမယ့် မေးခွန်းပါ။ “အဲဒီအခါကျတော့လည်း ကျွန်တော်တို့က ပြည်နယ်တစ်ခုစာလောက်တော့ ပြာကျသွားမှာပေါ့လို့ ဖြေလိုက်ကြတာပေါ့”လို့ မော်ရစ်ဆန်က ရယ်ရယ်မောမော ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Source: Wikipedia, tgdaily
ဘာသာပြန်ရေးသားပေးပို့သူ - zyw
Copy From Planet.com.mm
တကယ်လို့ ...ကမ္ဘာပျက်မယ် ဆိုရင်ပေါ့..ခိုင်းသူက လည်း ခိုင်းတတ်မှတော့ ရေးရတော့တာပေါ့ရှင်။ အင်းတွေးစရာတွေက တစ်ပုံကြီးပါပဲ. အတွေးတွေကို ထက်ခြမ်းခြမ်းရတော့ မယ်ထင်တယ် ။ ကျမက စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အပိုင်းကိုပဲ ဦးတည်ခရီးဆက်သွားမယ်။
ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်ဆိုရင် ကျမတို့ ကမ္ဘာသစ်ကို ကြိုဆိုရုံပေါ့ရှင်... ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ ဟော့ဒီကမ္ဘာကြီးကို စွန်ခဲ့ကြတာပေါ့... ကမ္ဘာဟောင်းမှာ အကျင့်ဟောင်းတွေ အယူဆဟောင်းတွေ နှင့်အတူ မကောင်းတာဟူသမျှ ကျမတို့ အကုန်လုံးစွန့်ခဲ့ကြတာပေါ့...
ဘယ်သူတွေနဲ့ ရှိနေသလည်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မဖြေချင်ပါဘူး ။ ကိုယ်ချစ်သူကို ဘေးနားမှာ အဆင့်သင့် ရှိနေခိုင်းမယ်။ ကျမတို ကမ္ဘာသစ်ထဲက ဧဒင်ဥယာဉ်ထဲကို သွားမယ်လေ.. အသစ်စစလူသားတစ်ယောက်အဖြစ် စတင်တဲ့အချိန်မှာ အသစ်စစ အချစ်တစ်ခုကို ဖြူဖြူစင်စင် စတင်ချင်ပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြား ခွဲခြားဆက်ဆံနိုင်စေတဲ့ အရောင်တွေကို ကျမစွန့်ခဲ့မယ်။ အလွှာ၊ ဂုဏ်ဓန စသည့်ဖြင့်ပေါ့လေ အားလုံးကို စွန်လိုက်မယ်။ ချစ်တတ်တဲ့ ရင်ဘတ်တစ်ခုကိုဘဲ ဧဒင်ထဲကို သယ်လာခဲ့မယ်။
ရင်ခုန်နေမှာပေါ့ရှင်… သိပ်ကိုသေချာတယ်။ ဧဒင်ထဲကို ၀င်မယ့် အသစ်စစ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ခွင့်ရဖို့ ရင်တွေသိပ်ကိုခုန်နေမှာပေါ့… ကမ္ဘာဦးမှာ လူတွေမဖန်တီးဘဲ တည်ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဧဒင်ဥယာဉ်ဆိုတာ ဘယ်လို မျိုးလည်းဆိုပြီး လျှောက်ပတ်ကြည့်ချင်လို့ စိတ်တွေ လောနေတယ်။ လူတွေမဖန်တီးဘဲ သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့အရာတွေကို ဦးစွာပထမ ကြည့်ခွင့်ရမယ့် အခွင့်ရေးဆိုတာ နည်းတဲ့အခွင့်ရေးမှ မဟုတ်တာရှင်။
ပိုင်ဆိုင်တာအားလုံးကို စွန့်လွတ်ဖို့ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်နေမယ်။ လိုချင်တက်မက်မှု ၊ မနာလို ဖြစ်မှု ၊ မာနတရား၊ စွဲလန်းမှု၊ ပူပင်သောက တွေအပြင် လူသားပီသနေစေတဲ့ တဏာမီးတွေအားလုံးကို စွန့်နိုင်စေဖို့ ကျမ လေ့ကျင့်နေမယ်။ ကမ္ဘာဟောင်းက အကျင့်တွေ မပျောက်ပျက်ဘဲ ကျန်နေမှာစိုးလို့။ ကျမအတွက်လည်း ကမ္ဘာဦးသမီးပျို ၀တ်စုံတစ်စုံလောက် ရှာဝယ်ရအုံးမယ်.. ၀တ်လှစ်စလှစ် ပိတ်စပါးပါးလေး ကို ပတ် ပန်းလေးတစ်ပွင့် ပန်ထားတာမျိုးတော့ ကျမ ပုံတွေ မြင်ဖူးတယ် ။ ကျမက ပန်းလည်းမပန်တတ်ဘူး ။ ကမ္ဘာပျက်တဲ့အချိန်မှာ ကျမက အဆင်သင့် အဲဒီဝတ်စုံကို ၀တ်ပြီးသား ဖြစ်နေစေရမယ်။
ဒီကမ္ဘာပျက်စီးသွားရင် ပျက်စီးခြင်းထဲကို ပါဝင်သွားမယ့် ဘုရား၏ တရားတော်၊ ခေတ်အဆက်ဆက်က လူအသက် ပေါင်းမြောက်မြားစွာကို စတည်းပြီး တည်ထောင်ခဲ့ကြတဲ့ မြို့ပြတွေ၊ လူတို့၏ ပူဇော်ပသခံ အနှပညာလက်ရက်တွေ ၊ လူသမိုင်းကြောင်းကို ဖော်ညွန်းထားတဲ့ ပြတိုက်တွေအတွက် နှမြောမိတာအမှန်ဘဲ ။ ကျမက ဒီကမ္ဘာက မခွာရသေးတော့လည်း ကမ္ဘာသူလေး ပီသစွာ နှမြောတွန့်တိုတဲ့အကျင့် ခုတိတော့ ရှိနေသေးတာအမှန်ဘဲ။
ဒီ ကမ္ဘာကို ခေတ်အဆက်ဆက်က ပျက်စီအောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ လူဆိုးသူခိုးတွေ ကမ္ဘာသစ်ထဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာမှာကို အကြောက်ဆုံးပဲ ။ သူတို့ကို ကျမက အလိုမရှိဘူး ။ စစ် နှင့် ဘာသာတရားက လူတွေကို ဖျက်စီးနေတယ်လို့ ကျမက မြင်တယ်။ လူလောဘ က တဆင့်ပွားလာတဲ့ အာဏာပါဝါတွေကြောင့် လက်ရှိကမ္ဘာစုတ်မှာ စစ် တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဘာသာတရားတို့၏ အယူကြီးမှုကြောင့် အတ္တလွန်ကဲ့တဲ့ ဘာသာရေးစစ်တွေကို ကျမ ကမ္ဘာသစ်ထဲ ထပ်ဖြစ်လာမှာကို စိုးတယ်။ လူတစ်ယောက်၏ အသက်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ကမ္ဘာသစ်လေး ဖြစ်ချင်တယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့  တန်ဖိုးကို လူသားတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးဖြင့် တိုင်းတာတဲ့ ကမ္ဘာသစ်လေး
ဖြစ်ချင်တယ်။ လူအဆင့်တန်းခွဲခြားမှုတွေ မရှိချင်ဘူး။
ဆောင်ထားချင်တာက ဓါတ်လုံးတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် မှော်အတတ်တစ်လက်ကို ဆောင်ထားချင်တယ်။ ပြီးတော့ ဧဒင် အ၀င်ဝမှာ အခမဲ့ တာဝန်ထမ်းမယ်။ ၀င်လာသမျှ လူတွေကို စစ်ဆေးမယ့် ကြီးကျပ်ရေးမှူး တာဝန်ကို နေ့မအား ညမအား ထမ်းဆောင်မယ်။ ကျမက ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာကို လက်မခံတော့လည်း ပင်ပန်းခံရတော့မပေါ့ရှင်။ အသားအရောင်မတူတဲ့ ဖန်ဆင်းခံရမှု၊ ဆင်းရဲခြင်း ချမ်းသားခြင်းတွေ တန်းမတူညီမျှမှု၊ အသိညဏ်မတူညီတဲ့ ဦးနှောက်များပိုင်ဆိုင်မှု၊ အတွေးခေါ်များလွန်ကဲ့ နက်နဲ့စွာ
တွေးခေါ်တတ်သူများ အား ကျမက ဓါတ်လုံးတစ်လုံးဖြင့် အားလုံးကို တန်းတူညီမျှ ဖြစ်စေမယ်။
စာတွေရေးမှာပေါ့ရှင် ။ ကဗျာတွေရေးမယ်။ သီးချင်းတွေ ရေးမယ် ။ တဂိုး ၀ိညဉ်လေးများ ငှားလို့ ရမယ်ဆိုရင် အချစ်ကဗျာလှလှလေးတွေ ပင်လယ်ကမ်းဘေးမှာ ထိုင်ရေးချင်ပါတယ်။ တဂိုးလိုမျိုး အသိညဏ်တွေ ကြွယ်ဝနေရင်တော့ ကျမ်းတစ်အုပ်လောက်ရေးချင်တယ်…
ဗယ်ဆင့်ဘင်ဂိုလိုမျိုး စတေးခံလူသားတွေအတွက် ကျမက ညစာလေး ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးချင်တယ်။ ငတ်ပြတ်ဆင်းရဲတွင်းထဲ သေဆုံးသွားတဲ့ လူတွေကို ညစာပါတီလေး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပြင်ဆင်ပေးချင်တယ်။ ၀ိညဉ်များနှင့် ကခုန်ခြင်းတော့ မဟုတ်ဘူး ၀ိညဉ်များနှင့် ပျော်ရွင်ရယ်မောခြင်းပေါ့ လေ။ အားလူး မီးဖုတ်တော့ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် ကြယ်တွေငိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို စာအုပ်ဖတ်ရင်း သနားခဲ့မိလို့။
အင်း ဂုဏ်ယူချင်တာက ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေက လှောင်ပြောင်နေသလိုဘဲ ။ ကျမဘာမှာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုမှ လူတွေအတွက် မလုပ်ပေးခဲ့ပါဘူး ။ ဒါက ရိုးသားစွာ ၀န်ခံတာလေ။ ဒါပေမယ့် ကျမ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ အသက်ရှင်လာရတဲ့ ကျေးဇူး ၊ လူဖြစ်လာရတဲ့ ကျေးဇူး၊ ကျမအမေ ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ အသက်တစ်ချောင်းအတွက် ကျမက မမေ့တတ်တာလေးဘဲ ကျမ ဂုတ်ယူရ တော့မှာပေါ့ရှင်… တစ်ခုတော့ရှိတယ် မယ်မဒီကို ပစ်ချပေးလိုက်တဲ့ လောကဘုံလေးက သိပ်ကောင်းတဲ့နေရာလေး မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် မယ်မဒီက ကျလာတဲ့နေရာမှာ ခေါင်းငုံမခံဘဲ အာခံခဲ့တာကို ဂုဏ်ယူချင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ နှင့် ငါ ဘယ်သူပိုစောင်း မလည်းဆိုတဲ့ လူစားမျိုး ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်ရှင့် ….
ဆင်းရဲတွင်းထဲ တွင်းဆုံးကျနေသေးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေအတွက်တော့ လွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ရှင်။
လူသားတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ မရတဲ့လူတွေအတွက်တော့ ကောင်းတာပေါ့ရှင်… ကမ္ဘာကန်ထဲကို လူတစ်စုဘဲ ခပ်ပြီးသောက်နေကြတာကို ။
ငါသည် ဤဘ၀မှ ကျွတ်လွတ်နိုင်မည်ဆိုပါက တစ်စုံတစ်ယောက်က ဖန်ဆင်းပေးနိုင်မည်ဆိုပါက ၊ ငါသည် မည်သည့်အလုပ်ကိုမှ အသက် ဆက်ရန်အတွက် မလုပ်ချင်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည် မည်သူနှင့်မှလည်း ၀တ်ကျေတန်းကျေး စကားမျိုး ပြောခြင်း ဆက်ဆံခြင်းတွေ မလုပ်ချင် သူဖြစ်ပါသည်။ ငါသည် အလေ့အကျင့် ဖြင့် ပြုံးပြ နှုတ်ဆက်နေရသော ဘ၀ကိုလည်း မုန်းတီးနေသူ ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည် လူမဖြစ်ချင်တော့ သူ တစ်ယောက် သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ကျူးရင့်ခွင့်ရှိသည်ကိုပင် ဤပိုစ်လေး တက်လာတဲ့ နှင်းနဲ့မာယာ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ။ စိတ်ထဲရှိတာ အားလုံးရေးချလိုက်တော့လည်း ကျမရင်ဘတ်တွေ ပေါ့ပါးသွားပါတယ်။
ဒီဆိုက်လေးမှာတော့အမှတ်တရ လာတင်ပေးတာပါ ရှင် ။
ဓါတ်ပုံလေးကိုတော့ ဒီဆိုဒ်လေးက နေ ကူးယူထားပါတယ်ရှင် http://www.wga.hu/art/d/durer/2/13/2/042.jpg
“ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ.. ကျွန်တော် M.D ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း နဲ့စကားပြောချင်လို့ပါ။”
“ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မ ၀ါဝါခိုင်မင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်...”
“ဟာ..မကြီးဝါလား ကျွန်တော် “ရွာသားလေးဓါတ်ပုံနဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်” ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...”
အယ်..ရွာသားလေးဆိုတော့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀က အမယ်မင်းရယ်မှ ပြောရတော့မယ်ဆိုပြီးငြီးချင်းချတဲ့ မောင်ရွာသားလေးမဟုတ်လား...”
“ဟီးဟီးဟီး ..ဟုတ်တယ်လေ မကြီးဝါရဲ့...”
“အယ်..ပြန်ဆုံရတာဝမ်းသာလိုက်တာရွာသားလေးရေ ... တကယ်ပြောတာ... ဒါနဲ့ ..အခုဘယ်မှာနေလဲ...”
“ကျွန်တော်အခု ရွှေပုန်းညက်ရိပ်မွန်မှာ ကျွန်တော့မိသားစုနဲ့ အတူနေကြပါတယ် မကြီးဝါရေ...”
“အလဲ...ပျော်စရာကြီးပေါ့..ဘာလဲ..ဟို အသဲ၂ထပ်ဆွဲကြိုးလေးပေးလိုက်တဲ့ ညီမလေးနဲ့လား...”
“ဟဟားဟား....ဟုတ်ပါတယ် မကြီးဝါရေ..း))))) ”
“အင်း..ဟုတ်ပါပြီ.. အခုလိုသတင်းကြားရတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ရွာသားလေးရေ...”
“ဟုတ်ကဲ့မကြီးဝါရေ... ကျွန်နော်လည်းသွားကိုက်နေတာလေ အဲဒါသွားပြချင်တာနဲ့ ဘယ်မှာပြရရင်ကောင်းမလဲလို့ စုံစမ်းနေတာ မထင်မှတ်ပါပဲ ဟိုတစ်နေ့က ဆာကူရာတာဝါမှာ “ရွှေပြည်သူခရီးသွားအေဂျင်စီ ”ထောင်ထားတဲ့ မရွှေပြည်သူလေး နဲ့ ဆုံကြရင်း မကြီး
၀ါက စေတနာအထွေထွေရောဂါအထူးကုဆေးခန်းကြီးဖွင့်ထားတယ်ကြားလို့ အခုစုံစမ်းလိုက်တာလေ... မကြီးဝါက သဘောကောင်းတော့ ကိုယ့်မောင်နှမတွေကို အလကားကုပေးမှာပေါ့နော့...း))”
“ဟတ်ဟတ်.. ( မကြီးဝါက သူ့ပို့စ်ရေးရင်ရယ်တဲ့ အတိုင်းရယ်လိုက်ပါတယ်. ပြီးတော့....)
ဒီမယ် မောင်ရွာသားရေ... မကြီးဝါရဲ့ဆေးရုံကြီးက ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကို အခမဲ့ကုပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ ပိုက်ဆံချမ်းသာကြတဲ့ နိုင်ဂံဂျားပြန်သူဌေးတွေကိုတော့ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပိုက်ဆံယူပါတယ်ကွယ်.... နိုင်ငံဂျားပြန်သူဌေးကြီးတွေဆီကမှ ပိုက်ဆံမယူရရင်တော့ မကြီးဝါ မွဲသွားမှာပေါ့ကွယ်...း)))
ကဲပါ..ရောက်အောင်သာလာပါသူဌေးလေးရယ်.....ကိုယ့်မောင်နှမတွေချင်း ၅၀% ဈေးလျှော့ယူဘို့နဲ့ ထုံဆေးမပါပဲ.သွားတစ်ချောင်း အဆစ်နှုတ်ပေးလိုက်ဖို့ မကြီးဝါပြောထားပါမယ်လေ.. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.”
“အောင်မယ်လေးရက်စက်ပါပေ့ မကြီးဝါရယ်... ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့..လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ...”
“ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ.... ကျွန်တော် “ Y.K .N အင်္ဂလိပ်စကားပြော နဲ့ အထွေထွေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလိမိတက်” က မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ရန်အောင် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ U.S.A ပြန် ဘလော့ဂါဆရာကြီးကိုရန်အောင်ရေ... ကျွန်မက ကိုရန်အောင်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဘလော့ဂါဆရာမကြီး ၀ါဝါခိုင်မင်းဖြစ်ပါတယ်......ဟဟဟားးး အရင်တုန်းက အကြောင်းလေးတွေ ပြန်ပြောရတော့လည်း စိတ်ချမ်းသာပြီး ပျော်ဘို့ကောင်းတယ်နော်.... ဘ၀ရဲ့အမှတ်တရလေးတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့...”
“ သြော် .....မ၀ါလား... ဟတ်ဟတ်ဟတ်..”
“ မဆုံဖြစ်ကြတာတောင် တော်တော်လေးကြာသွားပြီနော်....... ဘာလိုလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀လောက်ရှိသွားကြပြီပဲ..... ”
“နေကောင်းပါတယ် ကိုရန်အောင်ရေ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်... ကိုရန်အောင်လည်း မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ စထရက်စ်လျော့ နေရောပေါ့နော်... ဒါနဲ့ ကိုရန်အောင်ရဲ့ မ ရော နေကောင်းပါရဲ့လားရှင်...”
“သြော်..မ..မ..မ.... မ၀ါပြောလိုက်မှပဲ မကိုပိုလွမ်းသွားပြီဗျာ... အိအိအိ.” ( ကိုရန်အောင် ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ရင်း ငိုလိုက်တဲ့ အသံပါရှင်.)
တကယ်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ မ တို့က ဖူးစာမဆုံနိုင်ဘို့ ၉၀ % နှုန်းလောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မ၀ါလည်းသိနေတာပဲလေ.... မ နဲ့ ဖူးစာမဆုံနိုင်ခဲ့တော့ ညီမလေးပေါ့ မ၀ါရယ်..ဟတ်ဟတ်ဟတ်... ကျွန်တော့အိမ်သူသက်ထားဇနီးလေးက အရမ်းလိမ္မာပြီး အရမ်းချောတာဗျ... ရှူးးး မ၀ါ ..မ ရဲ့အကြောင်းတွေ လျှောက်မဖွနဲ့နော်... ကျွန်တော့ချစ်ဇနီးလေးစိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်မှာကို ကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးဗျာ.. ဟီးးးးရွှတ်.. ကျွန်တော် သူ့ကို အဲဒီလောက်ထိအောင် ချစ်တာဗျ... မ က အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီဗျာ... ကျွန်တော့ လက်ရှိဘ၀လေးကိုပဲ သာယာပျော်ရွှင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့မိသားစုဘ၀လေးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်မယ်လို့ ကျွန်တော်အဓိဌာန်ချထားတယ်ဗျာ.အခု ..ကျွန်တော့မှာ သားလေးတစ်ယောက် သမီးလေးတစ်ယောက် ကျွန်တော်သိတ်ချစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ချစ်ဇနီး လေးတစ်ယောက် ရှိနေပြီဗျာ ..ကျွန်တော့ဘ၀က အရင်နှစ် ၂၀ ကနဲ့စာရင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးနဲ့ အများကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပြီဗျာ... အရင်လို မ၀ါ ငြီးခိုင်းလို့ လူတွေမသိ သိအောင်ငြီးလိုက်ရတဲ့ အိုဘယ့်..နိုင်ငံခြားဆိုပြီး ကျွန်တော်ငြီးစရာလည်း မလိုတော့ဘူးလေ.......ဟတ်ဟတ်ဟတ် ”
“ကောင်းတာပေါ့ ကိုရန်အောင်ရယ်.. အခုလိုကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ရှင်.... ကျွန်မက လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်၂၀လောက်က တစ်မတည်း မနေတဲ့ ကိုရန်အောင်က “မ” လို့ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်တည်းသောသူကို မမေ့နိုင်ပဲ အစွဲလန်းကြီး စွဲလန်းနေမှာကို စိတ်ပူလို့ မေးကြည့်မိတာပါ.. အခုလိုကြားရတာ တကယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်... ဒါနဲ့.. နိုင်ငံခြားသွားကြမယ့် ကျွန်မ အလုပ်က ဆရာဝန်မလေး၂ယောက် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းတက်ချင်လို့ လွှတ်လိုက်ပါမယ်နော်..အနီးကပ် ၂လပြတ် အထူးနှုန်းနဲ့သင်ပေးပါရှင်...ကျေးဇူးပဲ ကိုရန်အောင်ရေ.”
ကားကို လမ်းဘေးတနေရာမှာရပ်....အနော်ရထာလမ်းမတလျှောက် ကျွန်မလျှောက်သွားရင်
“မနော်ဟရီစာပေ နဲ့ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီလိမိတက်” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုဒ်ကြီးကိုမြင်တော့ ကျွန်မ တချိန်ကခမည်းခမက်တော်ကြမယ်လို့ စခဲ့ကြတဲ့ မနော် (ခေါ်) ဘက်ဆဲလ်လားစာရေးဆရာမကြီးမနော်ဟရီ ကို သတိရမိသွားခဲ့ပါတယ်... သြော်..မေခ.. အခုဆိုရင် အမေရိကားမှာပဲလားမသိဘူးလို့တွေးနေတုန်းမှာပဲ
“မနော်ဟရီစာပေ နဲ့ မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေဖြန်းချီရေးကုမ္ပဏီလိမိတက်” ရဲ့ဆိုင်ဝင်ပေါက်မှာ ကျွန်မနဲ့အသက်ရွယ်တူလောက်ထင်ရတဲ့ စတိုင်ကျကျ အမျိုးသမီးခပ်ချောချောတစ်ယောက် ထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်... စတိုင်ကျကျအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ဖက်မှာ အိတ်ကလေးဆွဲပြီးလိုက်ပါလာတဲ့သူကတော့ .......
သေခြာပြီ..သေခြာပြီ..... မနော်ဟရီဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုဒ်ကလေးမြင်လို့ဆိုင်ရှေ့မှာရပ်ရင်းအတွေးဝင်နေတဲ့ကျွန်မက ဆိုင်ထဲကနေထွက်လာကြတဲ့ သူနှစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရရင်ပဲ....
“ ဟိတ် မေခ ရေ လို့ အော်ခေါ်လိုက်တော့ ...”
“ဟယ်..၀ါဝါ..၀ါဝါ မဟုတ်လား... ၀ါဝါ အရင်ကထက်စာရင် နဲနဲဝလာတယ်နော်.. ဖိုးစိန်ရေ.. ဒီမှာ ၀ါဝါရယ်လေ.”
“ဟာ..မကြီးဝါ ... တွေ့ရတာ ပျော်လိုက်တာဗျာ.... ကျွန်တော်တို့တွေ မတွေ့ကြတာ တော်တော်ကြီးကြာသွားပြီနော်...မကြီး ၀ါနေကောင်းရဲ့လား...အစ်ကိုဥာဏ်နဲ့ ညီမလေးခိုင်ကျန်တို့ရော နေကောင်းကြလားမကြီးဝါ.... ကျွန်တော်လည်း ဒီမတွေ့ကြတဲ့ အနှစ် ၂၀အတွင်းမှာ ဆိုက်ပရပ်စ်မှာပဲ နေဖြစ်တာများတယ် မကြီိးဝါရ.. စောစောကတောင် မကြီးနော်ကိုပြောပြနေတာလေ...မကြီးဝါဆီကိုသွားလည်ဦိးမယ်လို့..... ကျွန်တော်အခု ခဏပြန်လာတာလေ.. ... ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးလေး မေခိုင် က ဆိုက်ပရပ်စ်မှာ ခဏနေခဲ့တယ်... ကျွန်တော်က မကြီိးနော်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာ ရှယ်ရာတချို့ဝင်ထားလို့ အလုပ်ကိစ္စအတွက် ခဏပြန်လာတာ မကြီးဝါရေ..ပျော်လိုက်တာဗျာ..ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမသုံးယောက် နေ့လည်စာသွားစားကြရအောင် ကျွန်တော်ဒကာခံပါမယ်ဗျာ.”
“အိုကေ..သွားစားကြတာပေါ့... စပ်စုစိန် လေးရေ... ဒါနဲ့ မကြီးအိမ်ကိုလည်း အလည်လာဦးလေ...ဦးဥာဏ်ကတော့ ကျောင်းအလုပ်တွေနဲ့ အလုပ်များနေတယ်လေ... သမီးလေးကလည်း မနှစ်က နိုင်ငံခြားကတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီး နောက် ၃၊၄ လနေရင် မင်္ဂလာဆောင်ဘို့တစ်ခေါက်ပြန်လာဦးမယ်လေ..သမီးလေးခိုင်က အခု ဂျပန်မှာပါ။ဒါနဲ့...... ၀သန်နဲ့ရောတွေ့သေးလား... ၀သန်က မြေနီကုန်းမှာ ကားပြခန်းဖွင့်ထားတယ်လေ...ဂျပန်ပြန်သူဌေးကြီးဝသန်မိုးရဲ့ “ Tokyo ကားပြခန်း ” ကိုသွားပြီး မော်ဒယ်အသစ်ကားလေးတွေ သွားငမ်းလိုက်ဦး။ သူက တချိန်က မကြီးတို့ ဘလောဂါမောင်နှမတွေကားဝယ်ရင် ၁၀နှစ် အရစ်ကျငွေချေစနစ်နဲ့ ရောင်းပေးတယ်လေ.. ဟတ်ဟတ်.. တကယ်ပြောတာ.. ၀သန်တို့က စီပွားရေးမျက်စိရှိတော့ အရမ်းချမ်းသာနေတာပေါ့... ၀မ်းသာပါတယ်..တချိန်ကမောင်နှမတွေ အခုလို စီးပွားရေးအဆင်ပြေနေကြတာတွေ တွေ့ရလို့လေ... နောက်ပြီး တောင်ပေါ်သားလေး ကိုရောတွေ့သေးလား... မကြီး ဟိုတစ်ခေါက် တောင်ကြီးသွားလည်တော့ အဝေးပြေးဂိတ်မှာ “ မောရှမ်းမြေ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း” ပိုင်ရှင်ကြီး တောင်ပေါ်သားလေးကိုတွေ့ခဲ့ရသေးတယ်လေ....အဝေးပြေးကားကြီးတွေ ဘယ်နှစင်းတောင်ပိုင်နေပြီလဲမသိဘူး.. သူဌေးကြီးဖြစ်နေပြီလေ.တောင်ပေါ်သားလေးက..... နောက်ပြီး တောင်ပေါ်သားလေးရဲ့သူငယ်ချင်း၊တောင်ပေါ်သားလေးနဲ့ ရည်းစားအပြိုင်ထားဖက် (ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်မှ မစွန်) ပုလုကွေး လေးကလည်း “ ငယ်ငယ်ဖြူ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ အိမ်အလှဆင်လုပ်ငန်းအေဂျင်စီ” ပိုင်ရှင် ဖြစ်နေလေတော့ မကြီးတို့ ဆေးခန်းကြီးကို တည်ဆောက်ရာမှာ ပုလုကွေးကို အားကိုးခဲ့ရတာလေ..... အခုဆိုရင် နာမည်ကြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကြီး ဖြစ်နေပြီပေါ့.”
“ ဟုတ်ကဲ့မကြီးဝါရေ...မကြီးပြောပြမှပဲ ကျွန်တော်အကုန်သိရတော့တယ်...အရင်းတုန်းက ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ အခုလိုအဆင်ပြေနေတာကြားရလို့ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာတာပဲဗျာ... ကျွန်တော်လည်း နောက် ၂နှစ်လောက် ဆိုက်ပရပ်စ်မှာငွေစုပြီးရင် မြန်မာပြည်မှာ ပြန်လာပြီးအခြေချတော့မယ်ဗျာ... ”
“ မေတ္တာရောင်ပြန် စိန်ရွှေရတနာရောင်းဝယ်ရေး ”
လသာလမ်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ မေတ္တာရောင်ပြန်စိန်ရွှေရတနာရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ထဲကို ၀င်လာတဲ့ကျွန်မကို
“ ဟာ..အန်တီဝါကြီးလာတယ်.... အန်တီဝါ ခဏထိုင်စောင့်ပေးပါရှင် ..ကျွန်မ မမမေတ္တာရောင်ပြန်ကိုသွားခေါ်ပေးပါမယ်ရှင်.”
“ဟုတ်ပြီ..သမီးရေ... ညီမလေးမေတ္တာရောင်ပြန်ကို ခေါ်ပေးပါဦးနော်...အန်တီဒီမှာစောင့်နေပါမယ်.”
“ ရုံးခန်းထဲမလာတော့ပါဘူး ညီမလေးရေ... မမ ပစ္စည်းလာမှာတာပါ.. နောက်လမှာ မမသမီးလေးခိုင်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်လေ.. တခါတည်းညီမလေးကိုဖိတ်ရင်း တစ်ရတီစိန်တစ်လုံးစီနဲ့ လက်ထပ်လက်စွပ် ၂ကွင်း စပါရှယ်လုပ်ပေးပါညီမလေးရေ... အထူးအော်ဒါမှာတာနော်..... သမီးလေးက မင်္ဂလာပွဲပြီးရင် ဇနီးမောင်နှံ ၂ယောက်စလုံး နိုင်ငံခြားကို ပညာတော်သင်ထပ်ထွက်ကြမှာလေ.. မမ အမှတ်တရလက်ဖွဲ့လေးလုပ်ပေးလိုက်ချင်လို့ပါ ညီမရေ... စိန်သန့်သန့်လေးရွေးပေးပါနော်..”
“ဟယ်..ဟုတ်လားမမရဲ့... ခိုင်ကျန်လေးမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာပေါ့နော်... ၀မ်းသာပါတယ်မမရေ...ခိုင်ကျန်လေးက အခုဆိုရင် ဒေါက်တာခိုင်ကျန်ကြီးဖြစ်လို့နေပြီပေါ့နော်....ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ မမရေ... ဟုတ်ကဲ့ မမ ..စိတ်သာချပါ... ခိုင်ကျန်လေးအတွက် မမရဲ့ မင်္ဂလာလက်ဆောင်လေးကို ညီမလေး အသန့်ဆုံးစိန်လေးတွေရွေးပြီးလုပ်ထားပေးပါမယ် မမ..စိတ်ချပါနော်.”
“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညစ်တာရောင်ပြန်လေးရယ်... မင်္ဂလာဆောင်ကျရင်လည်း ဆက်ဆက်လာခဲ့နော်... မမပြန်တော့မယ်.”
“ကော်ဖီသောက်သွားပါဦး မမရဲ့.. မမခေါ်တဲ့ ညစ်တာရောင်ပြန်လေးကို ညီမလေးက စွဲနေတာနော်.. ညီမလေးကိုလည် ခဏနေရင် မောင်ကလာကြိုတော့မှာ မမရဲ့ နေ့လည်စာထွက်စားကြမလို့လေ... သားနဲ့သမီးကတော့ ကျောင်းတက်နေကြတာနဲ့ပဲ မအားကြဘူးမမရေ... ညီမလေးတို့ နှစ်ယောက်က အပြင်မှာပဲစားဖြစ်ကြတာများတယ်... အခုမှ မြန်မာအစားအသောက်တွေ အတိုးချပြီးစားနေရတာ မမရ.. သမီးလေးခိုင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမောင်နဲ့အတူ ဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်နော် မမ.”
“ ကျွန်တော် ဒေါက်တာဖြိုး ပါ အစ်မ၀ါရေ... ”
“အိုကေ..ဆရာရေ..၀င်လာပါရှင်.. ဘယ်လိုလဲ ဆရာခြေခြင်းဂျိတ်ရာရေ... အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေရဲ့လား... ဟတ်ဟတ်..အစ်မက အရင်နှစ် ၂၀ ကအကြော်ငးလေးတွေသတိရမိပြီး စမိပြန်ပါပြီ... ဒီမောင်နှမတွေနဲ့ ဘယ်အချိန်အထိ ရေစက်ဆုံနေကြဦးမလဲ မသိဘူးနော်...”
“ ဟုတ်တယ် အစ်မ၀ါရေ... အစ်မရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စနေ၊တနင်္ဂနွေ အလုပ်အားရက်ကလေးတွေမှာ စေတနာနဲ့ လူနာတွေကိုကုသပေးနေရတာ အရမ်းပီတီဖြစ်ရပါတယ် အစ်မရေ.... ကျွန်တော့ အိမ်သူသက်ထားလေးကတောင် ပိုက်ဆံမရှိတဲ့လူနာတွေကို စရိတ်မျှပေးကျန်းမာရေးအစီအစဉ်နဲ့ အစ်မ၀ါက စနေ၊ တနင်္ဂနွေရက်ကလေးတွေမှာ Free ကုသခွင့်ပေးလို့
၀မ်းသာပီတိဖြစ်ပြီး အစ်မ၀ါကိုအားကျနေတာ အစ်မရေ... ဒါနဲ့ အစ်မ၀ါရေ.. ဒီနေ့ ဟိုကောင် လှလှ ကခါးနာနေလို့ဆိုလား မလာနိုင်ဘူးတဲ့... အဲဒါကျွန်တော့ကိုပြောခိုင်းလိုက်လို့ လာခဲ့တာ အစ်မရေ.. အလကား..သူခါးနာတာထက်..ဒီနေ့သူ့အမျိုးသမီးနဲ့သွားစရာကိစ္စတစ်ခုရှိပုံရတယ်... အဲဒီကောင်က မိန်းမကို အရမ်းကြောက်ရတာ အစ်မရ... အဟတ်..ကျွန်တော်တို့က ငယ်ကတည်းကအတိုင်း အကျင့်မပျောက်သေးဘူးအစ်မရဲ့... တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်အတင်းပြောရတာလေ...ဦးသူတွယ်တမ်းပဲ.... အစ်မသိတဲ့အတိုင်းပဲ... ဟက်ဟက် ...ကျွန်တော်သွားတော့မယ် အစ်မ.. အလုပ်ဆက်လုပ်လိုက်ဦးမယ်နော်..ဟိုကောင်လာရင် မေးလိုက်ဦးနော် အစ်မ.....သူက ဆရာဝန်မလုပ်သင့်ဘူး...ဓမ္မစရိယတရားပြတဲ့ ဆရာလုပ်သင့်တာလေ... ဟက်ဟက်.. ကျွန်တော်ပြေးပြီ အစ်မရေ....း))”
“ ဟုတ်ပါပြီ..ဆရာရယ်.....ဆရာတို့လည်း အသက်သာ ၄၀ကျော်လာကြပြီ အခုအထိသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ရင် ကလေးစိတ်က မပျောက်ကြသေးဘူး..ဟတ်ဟတ်.... ဆရာတို့ကိုလည်း အစ်မက အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.... အလုပ်အားရက်တွေမှာ အိမ်မှာ ဇိမ်နဲ့ မနားကြပဲ လုပ်အားလာပေးနေကြလို့ လေးစားပါတယ် ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ ရေ. ”
“ မမရေ...... ဆေးကုမ္ပဏီ ကဆေးတွေလာပို့ပါတယ် မမ ”
“ ဟုတ်ပြီလေ..ညီမလေး လက်ခံထားလိုက်နော်... ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါမမ စိတ်ချပါ... ဒါပေမယ့် အခုလာပို့တဲ့ဆေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးက မမနဲ့ တွေ့ချင်လို့ပါတဲ့.... ”
“ဟုတ်လား ညီမလေး... ရုံးခန်းထဲကို လွှတ်လိုက်ပါနော်.”
“ မမ၀ါ ”
“ကျွန်တော် နေလင်းလေမမ၀ါရဲ့ မမှတ်မိတော့ဘူးလား..”
“အို..ဟုတ်ပါရဲ့..မောင်နေလင်းပေပဲကို... တွေ့ရတာ ၀မ်သာပါတယ် မောင်နေလင်းရေ..ဒါနဲ့ ပူတူတူးလေးရော နေကောင်းပါရဲ့လား.. ညီမလေးဝါ၀ါကိုပါ ခေါ်လာတာ မဟုတ်ဖူးနော်..ညီမလေးကိုလဲတွေ့ချင်နေတာလေ.....”
“ဒါနဲ့ မောင်နေလင်းက အခုအစ်မတို့ဆေးရုံကိုဆေးတွေစသွင်းနေတဲ့ “ ၀ါဝါလင်းဆေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးလား... အစ်မ မသိလိုက်ဖူးရယ်လေ..မောင်နေလင်းတို့ကုမ္ပဏီကနေ ဆေးတွေသွင်းဘို့ ဆက်သွယ်လာကြတုန်းက အစ်မ သမီးလေး မင်္ဂလာပွဲကိစ္စအတွက် စီစဉ်စရာတွေလုပ်နေရတာနဲ့ ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ မရင်းနှီးလိုက်ဖူးဖြစ်သွားတယ်... အခုမှ မောင်နေလင်းရောက်လာလို့ သိရတာလေ... တွေ့ရတာ တကယ်ပဲ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်မောင်နေလင်းရေ...... ဒီလိုဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ က မောင်နှမလေးတွေကို သတိရမိသွားသလို မောင်နေလင်းရေးခဲ့တဲ့ တိန်..တိန်...တိန် ပို့စ်လေးကို မကြာခဏသတိရမိနေတယ်လေ.... ဟဟားး မောင်နေလင်း စာရေးကောင်းခဲ့တာ တကယ်ပါပဲ.....နောက်လာရင် ညီမလေးဝါ၀ါကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ပါဦးနော်.”
“ ဟုတ်ကဲ့ပါ မမ၀ါရေ..ထပ်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျာ..ပူတူတူးလေးပါ ခေါ်လာခဲ့မယ်နော်.. မမ၀ါက ဒံပေါက်ဝယ်ကျွေးပေါ့.”
“ဟဟဟား.. ကျွေးပါမယ်ရှင်... မောင်နေလင်း ဒံပေါက်ကြိုက်တာ အစ်မသိနေပါတယ်... ကဲ..ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကော်ဖီပဲသောက်သွားတော့နော်... နောက်တစ်ခါ ညီမလေးနဲ့ နှစ်ယောက်လာမှပဲ ဒံပေါက်လိုက်ကျွေးတော့မယ်....”
“ ဟုတ်ကဲ့ပါမမ၀ါ ”
ရန်ကုန်မြို့ ......................နေဦးမြတ်ကိုကို(Ko Ko Construction) နှင့် ဒေါ်ရူပါ ( ရူပါနွယ် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး)
ဒေါက်တာမြတ်သူရကို M.B.B.S (Ygn.)
ရန်ကုန်မြို့...................နေ ဒေါက်တာဥာဏ် ( သွားနှင့်ခံတွင်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ) နှင့် ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း ( စေတနာ အတွေတွေရောဂါကုဆေးခန်း) တို့၏ တစ်ဦးတည်းသောသမီး
ဒေါက်တာမေမြတ်နိုးခိုင် M.B.B.S (Ygn)
တို့၏မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို Trader Hotel တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀က ကျွန်မ ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်းနှင့်သိကျွမ်းခင်မင်ခဲ့သော ဘလော့ဂါမောင်နှမအားလုံးတို့ကို မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲသို့ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ပေးကြပါရန် ခင်မင်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ရှင်။
Ps. ဒီ Tag post လေးမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ နာမည်လေးတွေအားလုံးကို Tag Post လေးတွေရေးပေးကြဘို့ ရီကွက် လုပ်ပါတယ်။
နောင်လာမယ့်အနှစ် ၂၀ အတွက်စိတ်ကူးလေးတွေဘယ်လိုယဉ်ထားတယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ပြောပြပေးဦးလို့ ရွာသားလေး(YTU)က Tagလာတဲ့အတွက် အင်းးး စိတ်ကူးတွေ စိတ်ကူးတွေ“ စိတ်ကူးတိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုပါရင် ...:D
နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀မှာတော့ ကျွန်မတို့မိသားစု နိုင်ငံခြားပဲပြန်ရောက်နေမလား ၊ မြန်မာပြည်မှာပဲ အခြေတကျဖြစ်နေမလားဆိုတာ မပြောနိုင်သလို ....မနက်ဖြန်ဆိုတာတောင် မသေခြာတဲ့လူ့ဘ၀ကြီးမှာ နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀အတွက်စိတ်ကူးလေးတွေရေးပေးဖို့ပြောလာလေတော့ ...စိတ်ကူးယဉ်တာပဲနော်...ပိုက်ဆံပေးရတာမှမဟုတ်တာလေ... စိတ်ကူးလေးတွေပဲရင်းရတာဆိုတော့..... နောင်လာမယ့် အနှစ်၂၀အတွက် ကျွန်မလည်း စိတ်ကူးယဉ်လိုက်ပါတယ်ရှင်.... ကျွန်မကို စိတ်ကူးယဉ်ခွင့်ပေးတဲ့ မောင်ငယ်ရွာသားလေးဝိုင်တီယူကိုလည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မောင်လေး ၊ညီမလေးတွေကို နိုင်ဂံဂျားပြန်ငြီးချင်းလေးရေးခိုင်းပြီး... မောင်လေး ၊ညီမလေးတွေ ရေးပြီးသားတက်ဂ်ပို့စ်လေးတွေလိုက်ဖတ်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားမှာရုန်းကန်လှုတ်ရှားနေရတဲ့ဘ၀လေးတွေကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်ရလေအောင် ရေးသားပေးထားကြတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းတကယ်ဖြစ်မိပြီး “မောင်လေး ၊ညီမလေးတွေရေ ... အခုအချိန်မှာ အနာခံထားကြ ..နောင်လာမယ့် အနှစ်၂၀လောက်ဆိုရင် မောင်လေး ၊ ညီမလေးတွေဟာ သူဌေးကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီး အခုလိုရုန်းကန်လှုတ်ရှားခဲ့ကြတာလေးတွေဟာ ဘ၀ရဲ့တစိတ်တပိုင်းအမှတ်တရလေးတွေဖြစ်နေခဲ့မှာပါ၊နောင် လာမယ့် အနှစ် ၂၀ ကျရင် ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကို .. ဖေဖေတို့ မေမေတို့ အခုလိုချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀လောက်က ဖေဖေတို့ မေမေတို့ ဘယ်လို ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာတွေကို ရင်ထဲက ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရ ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်အဖြစ် ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေကို မြိန်ရည် ယှက်ရည်လေးပြန်ပြောပြနိုင်မှာ သေခြာနေပါတယ်ကွယ်.” လို့ ပြန်ပြောချင်လို့ ပို့စ်လေးတစ်ခုရေးမယ်လို့စဉ်းစားနေမိတာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မောင်ရွာသားက နောင်လာမယ့်အနှစ် ၂၀ ဆိုတဲ့ Tag post လေးရေးခိုင်းလာလေတော့ ရေးချင်ရက် လက်တို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။း)))
ဒီပို့စ်လေးမှာ ကျွန်မရဲ့ “ နိုင်ဂံဂျားပြန်တစ်ယောက်ရဲ့ ငြီးချင်း” တက်ဂ်ပို့စ်လေးမှာ တက်ဂ်ခဲ့တဲ့ မောင်နှမ (၁၀)ယောက်ရဲ့နာမည်လေးတွေအားလုံးနဲ့အတူ တချို့မောင်လေး၊ ညီမလေးတွေရဲ့နာမည်လေးတွေကိုပါ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်..ကျွန်မရေးသားရာမှာ တစ်စုံတစ်ခုအမှားပါလာခဲ့ရင် ၊ မကြိုက်တာရှိခဲ့ကြရင်တော့ ဒီပို့စ်လေးဟာ မောင်နှမတွေအားလုံးကို ပျော်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ရေးသားခဲ့တာမို့ စေတနာအမှားသာဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း ကြိုတင်မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်နော်... ဖိုးစိန်ကိုတော့ နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀အထိမျက်စိရှုတ်မှာစိုးလို့ မြန်မာပြည် ပြန်မခေါ်သေးပဲ ဆိုက်ပရပ်စ်မှာပဲ ထားလိုက်ပါတယ်....း))) ..
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ Tag post လေးတစ်ခေါက် ရေးပြီးခဲ့ပါပြီ။ကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ အချစ်အကြောင်းနဲ့ သိတ်မဆိုင်တော့သလို တွေးမိပြီး Tag post လေးကို ပြီးရင်ပြီးရော အဖြစ်ပဲ ရေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ဟော..အခုတဖန် ..တီတီဝါ ရဲ့ အချစ်ကို သုတေသနလုပ်ချင်လို့တဲ့ မောင်ငယ်ကိုရဲက တက်ဂ်လာပြန်လေတော့ တခြားရေးထားကြတဲ့သူတွေဆီကို လိုက်ဖတ် ပညာယူပြီး ဘယ်လိုလေးရေးရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ် ...ကဲ.. မထူးတော့ပါဘူး..ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပဲရေးတော့မယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ၊ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ အချစ်အကြောင်းလေးကိုပဲ မောင်နှမတွေကို ဝေမျှပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်မိလိုက်ပါတော့တယ်....
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်လောက်က ကျမ အချစ်ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အချစ်က အလွန်ချစ်တတ်သော ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်ဟာကျမကို အလွန်ချစ်တယ်။ အလွန်ချုပ်ချယ်တယ် ၊ အလွန်သ၀န်တိုပါတယ်။ကျမဟာ အလွန်ချစ်တတ်တဲ့ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဟိုးငယ်စဉ်အချိန်က ကျေနပ်မှု ၊ ၀မ်းသာမှု ၊ ဂုဏ်ယူမှုတွေကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချုပ်ချယ်လွန်း ၊ သ၀န်တိုတတ်လွန်းတဲ့ မောင့်ကြောင့် ကျမမှာ အနေကျဉ်းကျတ်ပြီး မွန်းကျတ်မှုတွေပါ တပြိုင်တည်း ခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်ပါ... ကျမတို့ အိမ်ထောင်သက် ၁၂နှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်။ မောင်ဟာ ကျမအပေါ် ချစ်သူရည်းစားဘ၀တုန်းက အတိုင်းပဲ ချစ်နေဆဲ၊ ဂရုစိုက်နေမြဲ ၊ ချုပ်ချယ်နေဆဲ ၊ သ၀န်တိုနေမြဲ ပါပဲ ။
အခုအချိန်အထိ မောင်မပါပဲ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်ထွက်လည်ကြရင်း မထင်မှတ်ပဲ ယောကျာင်္းလေးမိတ်ဆွေတွေပါလာခဲ့ရင် သိသိသာသာကို ငြိုငြင်တတ်ပါတယ်။ ကျမကလည်း ကိုယ်အမှားလုပ်တာမှ မဟုတ်ပဲနော်.. သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကို ပေါင်းသင်းတာပဲမို့ ကျမကို သ၀န်တိုငြိုငြင်ရင် တကယ်ခံစားရပါတယ်။ အချစ်ခံရလွန်းတော့လည်း တခါတလေ စိတ်ညစ်မိပါတယ်။
ဘလော့ဂ်မှာ မောင်လေးတွေ ၊ ညီမလေးတွေနဲ့ ကျမခင်ပါတယ်။ကျမက စိတ်ရင်းအတိုင်းပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီး ခင်ခင်မင်မင်ပေါင်းတတ်ပါတယ်။ကိုယ်က အစ်မကြီးတစ်ယောက်လေ ။ မောင်လေးတွေ ညီမလေးတွေကိုလဲ တကယ်ခင်မိပါတယ်။အဲဒီအတွက်တော့ အိုကေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်လုပ်ဖို့ မောင်က စတင်တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ G talk မှာ invited လုပ်လာကြတဲ့ သူတွေကို accepted လုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ယောကျာင်္လေးဆိုရင် Chatting မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ မောင့်ရဲ့အမိန့်ကြောင့် ကျမ အကုန်လုံးကို ပြန်ပြီး block လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံများနော်... အဲလိုအူတိုတာလေ။ ကျမလဲ အဖွားကြီးဖြစ်ခါနီးနေပါပြီ။ မောင်ကတော့ အမြဲ အူတိုနေမြဲ ၊ အူတိုနေဆဲပါပဲ ။ ကျမမှာလဲ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေနဲ့ ကျေနပ်နေပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း လိပ်ပြာသန့်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို မယုံကြည်သလိုကြီးခံစားရလို့ အခံရခက်နေမိခဲ့ပါတယ်။
မောင်က ကျမကို အခုအချိန်အထိကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်သလို အရမ်းချစ်နေဆဲပါပဲ။သူက ကျမကိုချစ်လွန်းတော့ ကံကြမ္မာဆိုတာ သိနိုင်တာမဟုတ်ဖူးတဲ့ အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် ကွဲကွာသွားရမှာကို သူအလွန်စိတ်ပူကြောင်း ပြောပြီး ၊ ကျမကိုချုပ်ချယ်သ၀န်တိုမိကြောင်းတွေပြောပြတတ်တယ်လေ။
မောင် ကျမကိုအရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာကို ကျမခံစားလို့ရပါတယ် မောင်ရယ်။ဒါပေမယ့် မောင့်ရဲ့အချစ်တွေ ၊ ချုပ်ချယ်မှုတွေ ၊ သ၀န်တိုမှုတွေအောက်မှာ တခါတလေလဲ စိတ်ကျဉ်းကျပ်လွန်းလို့ မကျေနပ်မှုလေးတွေခံစားရပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း သြော်..သူက ငါ့ကိုအရမ်းချစ်လို့ သ၀န်နိုတာပဲလေ ၊ ယူကြပြီးမှ ကိုယ့်ဇနီးမယားအပေါ် မချစ်ခင် ၊မကြင်နာတတ်ကြတဲ့ ယောကျာင်္းတွေထက်စာရင် ကိုယ့်အပေါ်အရမ်းချစ်တဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာပဲ ငါအရမ်းကံကောင်းပါတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်ခွင့်လွတ်မှုတွေနဲ့ ဖြေသိမ့်ရပါတယ်။
သြော်... အချစ်တဲ့ ... အမျိုးမျိုးပါပဲနော်.....
ကျမပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေက ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် ရဲ့သီချင်းလေးလိုပါပဲ... “ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ အချစ်တွေက မီးနဲ့ရေ ”တဲ့....
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်းကျမဟာ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေနဲ့ ပူလောင်နေတတ်ပါတယ်...
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်းကျမဟာ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေနဲ့ အေးမြနေတတ်ခဲ့ပါတယ်...
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အူတိုတတ်လွန်းတဲ့ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေနဲ့ မွန်းကျပ်နေမိပြန်ပါတယ်....
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း အရာရာမှာ ကျမကို ဦးစားပေးအလိုလိုက်တတ်တဲ့ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေအတွက် ဂုဏ်ယူနေမိပြန်ပါတယ်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်...ကျမကို အရမ်းချစ်တဲ့ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေကြောင့် မောင့်ကို ကျမနားလည်ပေးနေမိပါတယ်မောင်ရေ.....
စိတ်ချပါမောင်...ကျမအပေါ်အရမ်းချစ်တဲ့ မောင့်အပေါ် ကျမဘယ်တော့မှ သစ္စာမပျက်ပဲ ကျမအသက်ရှူရပ်တန့်သွားတဲ့ အချိန်အထိ သည်းခံခွင့်လွတ်ခြင်းတွေနဲ့ အမြဲလက်တွဲသွားမှာပါ မောင်ရေ.... မောင်သာ ကျမရဲ့ဘ၀ပါ... မောင်သာ ကျမရဲ့ကမ္ဘာပါ ...
ကဲ... ကျမရဲ့အချစ်အကြောင်းလေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲရှင်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ရဲ့ သီချင်းလေးကတော့ “အချစ်ဆိုတာ ချစ်နေဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်”တဲ့ လေ.....
“နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မှုများနဲ့ သ၀န်တိုခြင်းကင်းစွာ ချစ်တတ်ကြပါစေ.....”
ဒီနေ့တော့ နိုင်ဂံဂျားပြန် ( နိုင်ငံခြားပြန်) အကြောင်းလေးပို့စ်ရေးချင်စိတ်ပေါက်လို့ ရေးလိုက်ပါဦးမယ်နော်...
နိုင်ဂံဂျားပြန် ဆိုရင် ကျမတို့မြန်မာတွေက အရမ်းအထင်ကြီးကြတယ်လေ... နိုင်ငံခြားသွားရတော့မယ်ဆိုရင်ပဲ ချက်ချင်းသူဌေးဖြစ်သွားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ကျမတို့ ဂျပန်လာရမယ်ဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေကပြောကြပါတယ်... “မ၀ါတို့တော့ သူဌေးဖြစ်ပြီ ဂျပန်တောင်သွားရမှာ”တဲ့.. ဟတ်ဟတ်. ဂျပန်သွားပြီး ဂျပန်ရောက်သွားတာနဲ့ ငွေဘုံကြီးပေါ်ထိုင်ရတော့မယ့် အတိုင်းပါပဲ...
နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့သူတိုင်း အလကားနေကြရင်းနဲ့ သူဌေးမဖြစ်ကြဘူးဆိုတာကို နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေကြတဲ့သူတိုင်း သိကြပါတယ်... နိုင်ငံခြားက ပြန်လာကြတဲ့ တကယ့်သူဌေးကြီးတွေလည်းရှိသလိုပဲ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ကလေးလုပ်ပြီး စုသင့်တာစု ၊ သုံးသင့်တာသုံး ၊ ကုန်သင့်တာကုန်နဲ့ တချို့ဆိုရင် ၀င်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေနဲ့ ကွက်တိ ၊ ငွေဝင်နေတာပဲရှိတာလေ တစ်လ တစ်လ ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကတော့ မြန်မာတွေကြားရင် မက်လောက်စရာကြီးပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် ထွက်တဲ့ငွေကလည်း သူ့နိုင်ငံ သူ့အသုံးစရိတ် ကိုယ်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေနဲ့က ကွက်တိ
ဖြစ်လို့နေကြပါတယ်... ပြီးရင် ကုန်စရာတွေကလည်း အလိုလိုပေါ်လာတတ်ပြန်တယ်လေ...း)
နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကြပြီး ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ်တကယ်စုဆောင်းနိုင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်... အဲဒီလိုလူတွေကိုတော့ လေးစားသလို အားလည်းကျမိပါတယ်... သူတို့တွေ ဒီမှာ အလုပ်ကြိုးစားလုပ် စုဆောင်းကြပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ကြရင်တော့ အရင်းအနှီးတစ်ခုရသွားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းကောင်းတစ်ခု တည်ထောင်နိုင်ကြပြီ ဆိုရင်တော့ သူတို့လို နိုင်ငံခြားပြန်တွေက မြန်မာတွေပြောသလို နိုင်ငံခြားပြန်သူဌေးကြီး ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်...း)))))
ဥပမာ .. ကျွန်မတို့မိသားစုအကြောင်းလေးကို ပြောပြပါမယ်...( သူဌေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း မဟုတ်ဖူးနော်..ငွေစုချင်ပေမယ့် ကုန်စရာတွေက အလိုလိုပေါ်ပြီး ငွေမစုနိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးပါ။)း)))
ဦးဥာဏ်ရတဲ့ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးငွေက တကယ်တော့ ဂျပန်မှာ လူတစ်ယောက်သုံးစားပြီးနေဘို့ လောက်လောက်ငင ပေးထားတဲ့ငွေပါ။ ဒီဝင်ငွေနဲ့ ကျမတို့က မိသားစုအတူလာနေကြတော့ တစ်လတစ်လေကျရင် အသုံးစရိတ်က ကွက်တိပါ ၊ တစ်လတစ်လေကျရင် စုနိုင်ပါတယ် ၊ အဲ.. တစ်လတစ်လေကျရင်တော့ မလောက်ငှတတ်ပါဘူး။း))))) ဒါပေမယ့် ဦးဥာဏ်က ဒီမှာ super student ဆိုပြီးအရွေးခံရလို့ နောက်ထပ်လခတစ်ခု ထပ်ရပါတယ်... အဲဒါလည်း .. လုံးခြာလိုက်နေခဲ့တာပါပဲ.......း))))မြန်မာပြည်ကမိဘဆွေမျိုးတွေကတော့ ကျမတို့မိသားစုဝင်ငွေက ၂လစာဆိုရင် တိုက်ခန်းတစ်ခန်း ၀ယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံတွေ အများကြီိးစုမိနေတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်... ဒါပေမယ့် ကျမက ဖုန်းဆက်တိုင်း ပိုက်ဆံမစုမိကြောင်းငြီးတွားတတ်လို့ ကျမကို “ ဂျပန်ကသူဌေးကလည်းအမြဲငြီးနေတာပဲ ”တဲ့လေ. ဟတ်ဟတ်...
တကယ်ပြောတာပါ... သူများတွေတော့ ပိုက်ဆံစုမိကြမလားမသိဘူး။ ကျမတို့ မိသားစုကတော့ ပိုက်ဆံကို ထင်သလောက်မစုမိပါဘူး။ မစုမိတာကလည်း ကျွန်မက အရမ်းခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ်ကြီး မသုံးတတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရောက်တုန်း တတ်နိုင်သလောက်ငွေစုမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးရှိနေပေမယ့် တော်တော်များများ ကျွန်မက ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် အလိုလိုက်မိတာ များပါတယ်.... ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ် စုဆောင်းမယ် ဆိုတာထက် ကျွန်မရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ စုသင့်သလောက်စုမယ်.. သုံးသင့်တာသုံးမယ် ၊ ၂ဖက်မိဘကို တတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့မယ် ။ နှစ်ဖက်မိဘကို တတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာလည်း အခုဆိုရင် ဂျပန်ကနေငွေမပို့ပေးနိုင်တာကြာနေပါပြီရှင်.. ဟိုအကြောင်းပြ ၊ ဒီအကြောင်းပြနဲ့ကိုပဲ ငွေက အလိုလိုကုန်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ ကျမတို့ပိုင်တဲ့ တိုက်ခန်းလေး ၂ခန်းနဲ့ ဟန်းဖုန်းလေးကို သူများကိုငှားထားတော့ အဲဒီဝင်ငွေလေးတွေနဲ့ပဲ မိဘတွေကို ထောက်ပံ့နေရတာ နှစ်ချီသွားပါပြီ။ ဒီကနေငွေမပို့ပေးနိုင်တာ နှစ်ချီသွားလို့ပါ။း)))
ကျမတို့ မိသားစု ပထမတစ်နှစ် ၂၀၀၅ မှာ ငွေစုနိုင်ပါတယ် ၊ ဒီရောက်ပြီး သိတ်မကြာခင်မှာ နှစ်ဖက်မိဘကို တစ်ဖက် ၅သိန်းစီ ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမတစ်နှစ်မှာ ငွေစုနိုင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ အဆောင်မှာနေရတဲ့ အတွက် အဆောင်လခက အများကြီးသက်သာပါတယ်။ အခုနေတဲ့ အခန်းခက တစ်လ ယန်း၆၀၀၀၀ ပေးရပါတယ်... အဆောင်မှာနေတုန်းက တစ်လ ယန်း ၁၀၀၀၀ ပဲပေးရပါတယ်။ ရေဘိုး ၊ မီးဘိုး ၊ ဂက်စ်ဖိုး ၊ အင်တာနက်ဖိုး ၊ဖုန်းဖိုးက အဆောင်မှာနေတုန်းက သိတ်မကုန်ခဲ့ပါဘူး။ အခု အပြင်အိမ်မှာနေတော့ ရေဘိုး ၊ မီးဘိုး ၊ ဂက်စ်ဖိုး ၊ အင်တာနက်ဖိုး ၊ဖုန်းဖိုး နဲ့ ဘာလာ..ဘာလာ.. ဘာလာက ယန်း ၄၀၀၀၀ လောက်ကုန်ကျပါတယ်.....သမီးလေးရဲ့ ကျောင်းလခက လစဉ် ယန်း ၁၇၀၀၀ ပေးရပါတယ်... ဒီကိုရောက်စက ယန်း၁၀၀ ဆိုရင် မြန်မာငွေ ကျပ် ၁၀၀၀ ကျော်ဆိုပြီး တွက်ပြီးသုံးလာခဲ့တာမို့ တော်တော်လေးချွေတာသလို ဖြစ်ခဲ့လို့ အိမ်စားသောက်စရိတ် သိတ်မကုန်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုဆိုရင် ဒီလ ၁၇ ရက်နေ့က ယန်း ၁၀၀၀၀ ထုတ်ထားပြီး တစ်ပတ်စာဈေးဝယ်လိုက်တာ ယန်း ၅၀၀၀ ကျော်ကုန်သွားပါတယ်... သမီးလေးနေမကောင်းလို့ ဆေးခန်းပြလိုက်တာ ယန်း ၃၅၀၀ ကုန်သွားပါတယ်..ကျန်တဲ့ တစ်ထောင်ကျော်က မုန့်လေးဘာလေးစားတော့ ယန်း၁၀၀၀၀ ၁၇ ရက်နေ့ကထုတ်တာ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကုန်သွားပါတော့တယ်.. ပိုက်ဆံက အသုံးမခံပါဘူး။ (၅ ရက်မှာ အပိုသုံးငွေ မပါပဲနဲ့ ယန်း ၁၀၀၀၀ ကုန်သွားပါတယ်.)ဒီလတော့ ငွေစုမယ်လို့ တွေးလိုက်ပေမယ့် ကုန်စရာက အလိုလိုပေါ်လာပြန်တာပါပဲ။
၂၀၀၅ ဒီကိုရောက်ပြီးနှစ်ဖက်မိဘကိုငွေပို့ပေးတယ်.. မောင်နှမ ၄ယောက်ကို မုန့်ဘိုး နည်းနည်းစီပေးလိုက်နိုင်တယ် ဒီလောက်နဲ့ပဲ ၂၀၀၅ ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်...
၂၀၀၆ ၂လပိုင်းမှာ ကျွန်မဖေဖေမဆုံးခင် ဆေးကုဘို့ ငွေပို့ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်... ၂၀၀၆ မတ်လမှာတော့ အဆောင်ကနေ အပြင်တိုက်ခန်းမှာ ငှားနေခဲ့ရတဲ့အတွက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က စုမိခဲ့တဲ့ ယန်းသောင်း ၂၀ ကျော်ကို တိုက်ခန်း တစ်လစာအတွက် ( စပေါ်၊ ပွဲစားခ အပါ) ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်....ပလုံ.. ပလုံ.........း)))) ငွေစုမိပုံများနော်...း)))))
၂၀၀၆ နှစ်လည်လောက်မှာတော့ မောင်လေး ၂ယောက်ရှိတာ တစ်ယောက်ကို နိုင်ငခြားထွက်နိုင်ဘို့ အရင်းအနှီး ထုတ်ပေးပြီး ၊ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ မောင်လေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ငွေ ပို့ပေးခဲ့ပြီး ကျမတို့ လက်ထဲမှာ ငွေလုံးဝ မကျန်တော့လို့ အကြွေးဝယ်ကဒ်နဲ့ သုံးခဲ့ရပါတယ်...း))( ကြွားတာ... ကြွားတာ )း))))
၂၀၀၆ နှစ်အကုန်မှာတော့ “တိုက်ခန်းလေး တစ်ခန်းဝယ်နိုင်အောင် ပိုက်ဆံစုကြမယ်ကွာ ”ဆိုပြီးတော့ ပိုက်ဆံစုကြတာ ၂၀၀၆ နှစ်ကုန်မှာတော့ ကျောက်မြောင်းမှာ ၇ လွှာ တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းကို ၇၈ သိန်းနဲ့ ၀ယ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်.... စင်္ကာပူရောက်နေတဲ့ မောင်လေးကလည်း ငွေ၁၅သိန်းပို့ပေးနိုင်ခဲ့လို့ ၀ယ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။မဟုတ်ရင် ပိုက်ဆံ မလောက်ပါဘူး။အဲဒီတိုက်ခန်းလေးမှာ ဦးဥာဏ်ကျောင်းက ဆေးကျောင်းသားလေးတွေကို တစ်လ ၃၅၀၀၀ နဲ့ အိမ်ငှားတင်ထားခဲ့တာ အခုအထိပါပဲ။
တကယ်တော့ တိုက်ခန်းကို ငွေတတ်နိုင်ရင် ၃ ၊ ၄ လွှာလောက် ၀ယ်ချင်တာပါ။ ကျွန်မတို့ ပထမပိုင်ထားတဲ့ တိုက်ခန်းကလေးကလည်း ကျောက်မြောင်းမှာပဲ ၄ လွှာပါ။ ၄ လွှာဆိုတော့ လူကြိုက်များပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ခန်းလေးကိုတော့ ကျွန်မဒီကိုလာခါနီး ကျွန်မတို့ပိုင်တဲ့ ဆေးခန်းလေးကိုရောင်းပြီး ၀ယ်ခဲ့တာပါ။ အခု ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို အိမ်ငှားတင်ထားခဲ့ပါတယ်... အဲဒီတိုက်ခန်းလေးက အိမ်ငှားခစားနေရတာ ၄ နှစ်ကျော်သွားပြီ ဖြစ်သလို ၄ လွှာဆိုတော့ တိုက်ခန်းဈေးလည်း နည်းနည်း တက်လာပါတယ်။ ( ပညာယူကြပါ.. ပိုက်ဆံစုမိရင် တိုက်ခန်းဝယ်ထားပြီး အိမ်ငှားတင်ထားကြပါ၊ အရှုံးမရှိပါဘူး။း))))
၂၀၀၇ ၊ ဧပြီလမှာတော့ ကျွန်မနေမကောင်းလို့ ကျွန်မနဲ့သမီးလေး မြန်မာပြည်ပြန်သွားခဲ့တာ လေယာဉ်စရိတ်က သားအမိ ၂ယောက် ယန်းသောင်း ၂၀ ကျော် ကုန်ကျပြီး မြန်မာပြည်ရောက်တော့ ၂ လနေကြပြီး ဆေးကုတာနဲ့ ၊အလှူလုပ်တာနဲ့ အသုံးစရိတ်က ၂ လကို သိန်း ၂၀ ကျော်လောက်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်.... ၂ဖက်မိဘကိုလည်း ကန်တော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေ... ပိုက်ဆံက ဒီကိုမပြန်လာခင်ပြတ်သွားလို့ ဦးဥာဏ်ကို ပို့လာခိုင်းတော့ အဲလောက်ပဲကုန်ရသလားဆိုပြီး နည်းနည်းပဲ ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်... သူပြန်ရောက်မှ မြန်မာပြည်က အသုံးစရိတ်တွေအကြောင်း သိပါလိမ့်မယ်.. အဟေးးးး))) အဲဒါနဲ့ စင်္ကာပူက မောင်လေးဆီဖုန်းဆက်ပြီး အကူအညီတောင်းတော့ မောင်လေးက ငွေ ၅သိန်းပို့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်... မြန်မာပြည်မှာ ၀င်ငွေမရှိပေမယ့် ထွက်တဲ့ငွေက တော်တော်မြန်ပါတယ်ရှင်.. သမီးလေးက “မေမေမုန့်ဘိုးပေး”ဆိုရင် ၂ ယောက်ဆိုရင် ၅၀၀ တန်မှ ရပါတယ်.. မောင်နှမ၀မ်းကွဲ ၄ ယောက်ဆိုတော့ တစ်ခါ မုန့်ဝယ်စားရင်ပဲ (သွားရည်စာလေးပဲ) ၁၀၀၀ တန်ပေးမှရပါတယ်.... ကြေးအိုးဆိုင်ကို မောင်နှမတွေ စုပြီးသွားစားကြရင် ငွေ ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှင်းရပါတယ်... ကိုယ်က နိုင်ဂံဂျားပြန်ကြီးဆိုတော့ ဒိုင်ခံရှင်းရတာ များပါတယ်....း))))) ပိုက်ဆံ တစ်သိန်းဆိုရင် ခဏဆို ပလုံသွားတာပါပဲ။ ဒါတောင် ပြန်ခါနီး ပိုက်ဆံပြတ်သွားပြန်လို့ အစ်မက အချိုအအေးကြိုက်တာ ၀ယ်ကျွေးခဲ့ရပါသေးတယ်...း)))
၂၀၀၇ ဇွန်လမှာ သားအမိနှစ်ယောက် ဂျပန်ပြန်လာကြပြီး ၂၀၀၇ သြဂုတ်လမှာ မြန်မာသူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ဂျပန်ပြည်တွင်းခရီး Hamamatsu , Gifu , Kyoto , Kobe , Oosaka , Nagoya မြို့တွေကို အလည်သွားခဲ့ကြပါပြီး Oosaka Hotel မှာ တည်းခဲ့ကြပါတယ်။ Nagoya ရောက်တော့ Nagoyaမြို့မှာ နာမည်ကြီးစိန်ဆိုင်ရှိတာကြောင့် အရောက်သွားကြပြီး နာဂိုရာကို ရောက်ခဲတယ် ၊ရောက်တုန်းဝယ်ကြရအောင်ဆိုပြီး အမှတ်တရ စိန်လက်စွပ်နဲ့ စိန်ဆွဲကြိုး ကို Credit card နဲ့ ၀ယ်ဖြစ်လိုက်တာ ၂၀၀၇ နှစ်ကုန်အထိ အကြွေးဆပ်လိုက်ရပါတော့တယ်လေ။း))))))) ( စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး ပြုံးဖြီးဖြီးကြီးနဲ့ပေါ့.. အဟတ်)း)))) အဲလိုနဲ့ ၂၀၀၇ မှာ ဘာငွေမှ မစုမိလိုက်ပါဘူး။
၂၀၀၈ မှာတော့ အကြွေးတွေ ကျေသွားလို့ ပိုက်ဆံပြန်စုကြရအောင်ဆိုပြီး ခရီးသိတ်မထွက်ဖြစ်ပဲ ပိုက်ဆံစုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်... ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုပဲစုစု တစ်နှစ်လုံးနေလို့ သိန်းတစ်ရာပြည့်အောင် မစုနိုင်ပါဘူးလေ... အလွန်ဆုံးစုနိုင် တစ်လ ယန်း၅ သောင်းနှုန်းပါပဲ။ ပိုက်ဆံစုမယ်ဆိုပြီး စုနေဆဲမှာပဲ ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလမှာ ဦးဥာဏ်က ပြင်သစ်မှာစာတန်းဖတ်ဖို့သွားရမှာဖြစ်လို့ လိုအပ်တာတွေဝယ်ပေးရင်း နဲ့ ကုန်စရာတွေက ပေါ်လာပြန်တာပဲလေ... ခရီးစရိတ် နဲ့ ဟိုတယ်စရိတ် ၊စားသောက်စရိတ်တွေ ပြန်ရပေမယ့် ကျန်တာတွေ အကုန် ကိုယ်အိပ်စိုက်ကုန်ရပြန်တာပါပဲ ။ ဦးဥာဏ်က ပြင်သစ်ရောက်မှတော့ မိန်းမအတွက် Louis Vuitton အိပ်ဝယ်ရမယ်ဆိုပြီး ဈေးကြီးလွန်းလို့ ကျွန်မက မမှာပေမယ့် Credit card နဲ့ ၀ယ်လာခဲ့လေတော့ ပြန်လာတော့ ဆပ်ပါဦး အကြွေး ၂ လ။း))))) အဲဒီ Credit card ကြီးက သုံးလို့တော့ အရမ်းကောင်းပါရဲ့ ကြွေးဆပ်ရတော့မယ်ဆိုမှ စာရင်းတွေထွက်လာလိုက်တာ မျက်လုံးပြူးပါရောပဲ.. အဟဲ.( အားလုံး တူတူပဲလေ.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်)း)))))
၂၀၀၈ နှစ်ကုန်အထိ အကြွေးဆပ်လိုက်ရပြီးတော့ ၂၀၀၉ မှာ စင်္ကာပူက မောင်လေးမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတော့ သွားချင်ပြန်လေရောလေ.. အဲဒါနဲ့ မောင်လေးတို့ကို လာမယ်ပေါ့ပြောလိုက်တယ်... သူတို့ကလည်း အရမ်းလာစေချင်ကြတယ်... ကျွန်မကလည်း သွားချင်တာ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေနဲ့ဆုံချင်တာလည်းပါတယ်လေ ညီမလေး Dream ကို စင်္ကာပူလာမယ်ဆိုပြီး ပြောပြထားလိုက်တယ်။ ညီမလေးဒရင်းကလည်း ကျွန်မလာရင် ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်နိုင်အောင်သူစီစဉ်ပေးမယ်ဆိုလို့ ပျော်စရာကောင်းမှာပဲဆိုပြီး ပိုသွားချင်ခဲ့မိပါတယ်.... ဒါပေမယ့် စင်္ကာပူမင်္ဂလာပွဲကို မေမေ နဲ့ မမက လာကြမယ် ဆိုတော့ သူတို့ကိုကြုံတုန်း ဂျပန်ဆက်လာစေချင်တာနဲ့ ဂျပန်ဆက်လာနိုင်အောင်ဖိတ်ခေါ်ပြီး ခရီးစရိတ်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်... အဲဒီတော့ ကျွန်မအရမ်းသွားချင်တဲ့ စင်္ကာပူခရီးစဉ်ကို ဖျက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ရပါတယ်။ မေမေ နဲ့ မမ ဒီရောက်ရင် သုံးဘို့ငွေလည်းလိုဦးမယ်။ ကျွန်မတို့ပါ စင်္ကာပူသွားရင် ပိုက်ဆံကလောက်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်လို့ ဦးဥာဏ် အလုပ်များတာကို အကြောင်းပြပြီး မောင်လေးကို မင်္ဂလာဆောင် မလာနိုင်တော့ကြောင်း ဖျက်ခဲ့ရပါတယ်... တကယ်တော့ ပိုက်ဆံမရှိတော့လို့ပါ။ အဟတ်း))))))
၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီမှာ မေမေ နဲ့ မမ ဒီကိုအလည်ရောက်ကြပြီး လည်စရာနေရာတွေကိုလိုက်ပို့ပေး ၊ အချိန်မရတာရယ် ငွေအခြေအနေရယ်ကြောင့် ဝေးဝေးလံလံနေရာတွေလည်း လိုက်မပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တိုကျိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီးနေရာလေးတွေကိုပဲ လိုက်ပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သွားသွား တစ်ရက် အပြင်ထွက်ရင် ခရီးစရိတ်နဲ့ စားစရာက ယန်း ၁၀၀၀၀ ပုံမှန် အနည်းဆုံးပါပဲ။ ဂျပန်မှာက ခရီးစရိတ်ကြီးပါတယ်။ ဝေးဝေးလံလံ ဘယ်မှ လိုက်မပို့နိုင်ခဲ့လို့ ဂျပန်ရောက်တုန်း အမှတ်တရအဖြစ် Shinjuku မှာရှိတဲ့ စိန်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီး မေမေ ၂ယောက်နဲ့ မမ ၂ယောက်အတွက် လက်စွပ်တစ်ကွင်းစီ လက်ဆောင်ဝယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မောင်လေး ၂ယောက်အတွက်တော့ နာရီ တစ်ယောက်တစ်လုံးစီပေါ့လေ... ဂျပန်ပြည်အမှတ်တရပေါ့.... ရှင်းလိုက်တာက သိတဲ့အတိုင်း Credit card နဲ့ဆိုတော့ ပလုံ ပလွမ်... ပလုံ ပလွမ် ( အသံတော့ မြည်တယ်. အဟတ်)း))) ဆပ်လိုက်ရတဲ့အကြွေး ဒီလမှပဲကြေပါတော့တယ်လေ... အဟားးးးး ( စုမိတာ..စုမိတာ.. ငွေတွေ ..အဲလောက်)း)))))) ဂျပန်မှာ နေတာ၎နှစ်ကျော်သွားပြီ တိုက်ခန်းလေး တစ်ခန်း နဲ့ ဖုန်းလေးတစ်လုံးပဲ ၀ယ်နိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူများတွေကြားရင်တော့ ရယ်မလား မသိပါဘူး။ တကယ်ပြောတာပါ။ ဒီလောက်ကလေးကတော့ ကြွားစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်. .း))))
အခု လာပြန်ပြီ တမျိုး.... ဦးဥာဏ်က စက်တင်ဘာ ပထမပတ်မှာ စင်္ကာပူမှာစာတန်းသွားဖတ်ရပါမယ်။ အဲလိုဆိုတော့ မီးမီးတို့လည်း လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်..း)))) သွားကြမယ် မိသားစု ၊ မတတ်နိုင်ဘူး ငွေကုန်တာ ကုန်ပါစေတော့ပေါ့။ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်သွားရင် ခရီးထွက်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ ဒီတခါ တကယ် စင်္ကာပူသွားကြမယ်လို့ စီစဉ်ထားပြန်ပါလေရဲ့...စင်္ကာပူမှာတော့ ဟိုတယ်တောင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားလိုက်ပြီ..အဟေးးး ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ် ခက်နေတာက ကျွန်မ ပတ်စ်ပို့စ်ဗီဇာက ၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီလကုန်အထိပဲရှိနေလို့ စကာင်္ပူသံရုံးမှာ ဗီဇာလျှောက်လို့ ရမလားလို့ ဦးဥာဏ်က ဒီနေ့စုံစမ်းတော့ ...စင်္ကာပူ သွားမှာက စက်တင်ဘာလဆိုတော့ အနည်းဆုံး ပတ်စ်ပို့စ်ဗီဇာက ၆ လကျန်မှရမယ်တဲ့လေ။ အဲဒါနဲ့ မြန်မာသံရုံးသွားပြီး အခွန်ဆောင်ပြီး ပတ်စ်ပို့သက်တမ်းမကုန်ခင် သက်တမ်းကြိုတိုးရပါဦးမယ်ရှင်။း)))) ကုန်စရာတွေက အဲလိုပေါ်လာတာ....
ဒီတခါတော့ မဖြစ်မနေ လာနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်... မောင်နှမတွေ အများကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံချင်ပါတယ်။
ကျွန်မလာရင် မုန့်ကျွေးဘို့ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်... အဟားးး စားရဦးမှာပဲ... ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ကြိုငြီးပြထားတာနော်.... တကယ်လာမှ မပြေးကြနဲ့ .... ဒီက လေယာဉ်စရိတ်နဲ့ ဟိုတယ်ခပဲ အကုန်ခံမှာ... စကာင်္ပူရောက်ရင်တော့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေအိမ်ကို တစ်အိမ်တက်ဆင်း လိုက်စားရတော့မှာပဲ။ အခုကတည်းက သတင်းပေးထားတာနော်.. ကြိုရှောင်ပုန်းနေလို့ရတယ်.....း)))))))
အတွေးချင်ဆုံး ၁၀ယောက်ဆိုပြီး ပန်းခင်းလေး က တက်ခ်ထားတာပါ.. ကြာပါပြီ ... မအားတာနဲ့ မရေးဖြစ်တာ ခု တက်ခ်အကြွေးတွေ များလာပြီဆိုတော့ စတင်ရေးပြီဗျာ စာရေးတဲ့မောင်နှမတွေထဲမှာ တွေ့မြင်ဖူးတဲ့ မောင်နှမတွေရှိသလို မတွေ့မမြင်ဖူးပဲ ခင်မင်တဲ့မောင်နှမတွေလည်း အများကြီးပါ .. အတွေ့ချင်ဆုံး၁၀ ယောက်ဆိုတော့ စာရေးတဲ့ မောင်နှမတွေထဲမှ အပြင်မှာ တွေ့ခွင့်ရချင်တဲ့ တွေ့ချင်မိတဲ့ ၁၀ယောက်ကိုပဲ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ် ..။၁၀ယောက်ထဲ ကန့်သတ်ထားတော့ ခက်သားပဲ ..။ ဘလော့ခ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ သိကျွမ်းခွင့်ရခဲ့တဲ့ မောင်နှမတွေ အားလုံးကိုတွေ့ချင်မိတာတော့ ရင်ထဲက ဆန္ဒပါ ..။
၁ ... ဘလော့ခ်စရေးတုန်းက တတိယမြောက် ခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ ညီမလေး .. ဝေလေး ပါ ..။ညီမလေး ဝေလေးနဲ့ ကဗျာအကြောင်းလေးတွေ စသည့်ဖြင့် ပြောခဲ့ရင်း သံယောဇဉ်တိုး ခင်မင်သွားတဲ့ ညီမလေးပါ ..။ခုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘီးဇီး နေတာနဲ့ အရင်ကလို စကားသိပ်မပြောဖြစ်တာ ကြာပါပြီ ..။အခွင့် ရှိသေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ညီမလေး ဝေလေးနဲ့ တွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ် ..။ပထမ စသိတဲ့တစ်ယောက်နဲ့ ဒုတိယကတော့ ပြည်တွင်း ပြန်လာတုန်းလေး တွေ့ဖူးသွားပါပြီ ..။
၂ ... စတုတ္ထမြောက်သိကျွမ်းခဲ့တဲ့ ညီမငယ် ငှက်ငယ်လေးပါ .. တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ မတူညီတဲ့အချိန်(နေ့ ၊ည )မှာ ညီမငယ်ငြိမ်းက မနက်ဆို ကျွန်တော်က ည ကျွန်တော်ညဆို သူက မနက် .. အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးပဲ ပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့ ညီမငယ် ငှက်ငယ်လေးကိုလည်း စကားတွေပြောရင်း ရင်းနှီးမှု ရလာတာနှင့် အမျှ တွေ့ချင်မိလာတဲ့အထဲ သူတစ်ယောက် အမြဲလိုလိုပါပဲ ..ခုတော့ စကားမပြောဖြစ်တာ တော်တော့ကို ကြာပါပြီ .. ခုဆို ကျွန်တော် ညပိုင်း အွန်လိုင်း တက်တဲ့ အချိန်တွေဆို ငြိမ်းကိုများ တွေ့မလားလို့ မျှော်နေတတ်မိပါတယ် ..။
၃ ... ညီမငယ် ငွန်ငယ်မိုးပါ .. စကားပြောရင် “ နော့ ” ဆိုတာလေး ထည့်ထည့်ပြောတတ်တယ် ညီမငယ်ပါ ..။
ငွန်ငယ် အားလို့ အွန်လိုင်းတက်လာတဲ့အချိန် ကျွန်တော်အွန်လိုင်းတက်တဲ့ အချိန်နဲ့ တိုးရင် စကားပြောဖြစ်တာ များပါတယ် ..။ခုတော့ မတွေ့ဖြစ်တာ ကြာပါပြီ .. ဘလော့ခ်လည်း သူကိုယ်တိုင် မရေးတော့ပါဘူး ..။ သူ့အစ်ကို ကိုလတ်ပဲ ဆက်ရေးပါတော့တယ် ။မောင်နှမ နှစ်ယောက်လုံးနဲ့လည်း တွေ့ချင်မိပါတယ် ..။ သတိတရလည်း ရှိပါတယ် ..။
၄ ...အဘွား နေရီနွယ်ပါ .. အဘွားနဲ့ကတော့ သူစာကျက်လို့ အိပ်ငိုက်လာတဲ့ အချိန် .. ပျင်းလို့ သက်ပြင်းချတဲ့ အချိန်တွေအပြင် တွေ့တိုင်း စနောက်ပြီး မောင်နှမအရင်းလို ပြောဖြစ်ကြတဲ့ အဘွားပါ ..(အဘွားလို့ ခေါ်ရခြင်းမှာ သူ့အိမ်ကို စသိခါစက စာဖတ်ပြီး ဆီပုံးမှာ ကျွန်တော့်ထက် အသက်ကြီးမယ်ထင်ပြီး အစ်မဆိုပြီး ရေးခဲ့မိတယ် .. နောက်ပိုင်း စကားပြောဖြစ်ကြတော့ ကျွန်တော့်ထက် အသက်ငယ်မှန်း သိခဲ့ရတယ် ...အဲမှာ သူက သူ့ကိုအသက်ကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ကောက်စွာနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီပုံးမှာ အဘိုး ဆိုပြီး ပြန်လာအော်လို့ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကို အဘွားလို့ စနောက် ခေါ်ခြင်းပါ . ။) စာတွေ ကြိုးစားနေတာလေ ..ကျွန်တော် လိုင်းပေါ် မရောက်တာနဲ့ ညီမလေး နဲ့ အေးဆေး မပြောဖြစ်တာ ကြာပါပြီ ..။ မောင်နှမအရင်းအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ ကတိတွေ ပေးထားတဲ့ ညီမလေးပါ .. သူ့နဲ့လည်း တွေ့ချင်ပါတယ် .။ ပါးကွက်ကလေးကတော့ အမှတ်ရစမြဲပေ့ါ ..။
၅ ... မကြီး အိန္ဒြာပါ .. ကဗျာတွေ အရေးကောင်းပြီး မောင်လေးတစ်ယောက်အပေါ် သွန်သင်ပြတဲ့ မကြီးပါ ..။
မကြီးနဲ့ မအားလို့ စကားမပြောဖြစ်ရင်တောင် အွန်လိုင်းမှာ မကြီး ရှိနေတယ် ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော်က ပျော်နေတတ်သူပါ ..စကားပြောဖြစ်တဲ့ အခါကျရင်တော့ အတိုင်းမသိ ပျော်နေမိတယ် .. ကဗျာအကြောင်းလေးတွေ ပြောလိုက် အလုပ်အကြောင်းလေးတွေ ပြောလိုက်နဲ့ နေ့ရက်ကလေးတွေ ကုန်လွန်လာတာနှင့်အမျှ မကြီးကိုလည်း တွေ့ချင်ပါတယ် .. တစ်ရက်တစ်ရက်နဲ့ မကြီးနဲ့ တွေ့ဖို့ နီးလာတာနှင့် အမျှ ပျော်နေမိတာလည်း အမှန်ပါ ..။ ဘ၀တာတိုမှာ ကျွန်တော် မြတ်နိုးရသော ကဗျာတွေ .. ကဗျာတွေကိုရေးနေသော မကြီး .. စသည်ဖြင့် ကဗျာတွေကြားမှာပဲ ကဗျာဆရာ .. မကြီးကို တန်ဘိုးထားပါ၏ ..။
၆ ... ကိုအိမ်ပါ .. ဟာသတွေပြောင်မြောက် ဖတ်ရသူ စိတ်အနောက်တွေ ပြေပျောက်အောင်ရေးနိုင်တဲ့ ကိုအိမ် ...
ပြီးတော့ ခုလက်ရှိ ချစ်သူ မရသေးဘူးလေ (လူတကာ သိအောင်လို့ ) ၊ အဲ့အစ်ကိုတော် ကိုအိမ်နဲ့လည်း တွေ့ချင်ပါတယ် ...မကြာတော့မဲ့ အချိန်မှာတော့ တွေ့ရမယ်တော့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ ..။
၇ ... အစ်မ၀ါပါ .. MBS နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခု တင်တာကို ကွန်းမန့်သွားပေးရင်း ခင်မိခဲ့တဲ့ အစ်မပါ ..
အပြန်အလှန် စာတွေ ဖတ်ရင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်ခဲ့တဲ့ အစ်မပါ .. အစ်မတော်လည်း ဘယ်အချိန် ပြန်လာမယ် မသိပေမယ့် အခွင့်ရှိသေးတယ် ဆိုရင်ဖြင့် တွေ့ချင်ပါသေးတယ် .. (အစ်ကိုနဲ့ သမီးငယ်လည်း ပါတယ်နော် ) ..။
၈ ... BLACK DREAM ပါ .. စာအရေးအသားကောင်းသလို နည်းပညာထဲမှာ ကျွန်တော် နှစ်သက်မိတဲ့အထဲ ဘလက်လည်း အပါအ၀င်ပေါ့ .. ပြီးတော့ ပြီးတော့ .... ထိုကြောင့် ထို့ကြောင့်လည်း သူ့ကို ခင်မိပါတယ် သူပြန်လာတဲ့ အချိန်တွေ့ရဦးမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်မိသလို တွေ့လည်း တွေ့ချင်ပါသည် ..။သူကတော့ ပြန်ရောက်ရင် ဘယ်သူ့ကို အရင်တွေ့မယ် မသိ .. ဟိဟိ ..။
၉ ... အစ်မ ကောင်းကင်ပြာပါ .. အစ်မတော်နဲ့ ကျွန်တော် အကြိုက်ချင်း တူတာ တစ်ခုရှိတယ် .. ။ ဘလော့ခ်သွားဖတ်ရင်း တွေးမိတာက ကျွန်တော့်ထက် အသက်ငယ်မယ်ထင်တာ .. တစ်ကယ့်တစ်ကယ် သိပြီဆိုမှ ကျွန်တော့်ထက် အသက်ကြီးတာ သိတာ .. ဟီး .. ( ၁၆နှစ် ဟုတ်ဘူးနော် ).. ပြီးတော့ ပြန်လာမယ် ပြန်လာမယ်ဆိုပြီး ပြန်မလာသေးတဲ့အတွက်ရော အကြိက်ချင်းတူတာလေး အတွက်ရော ကဗျာလေးတွေ လာလာဖတ်တဲ့အခါ စိတ်ထဲက သံယောဇဉ်တိုးလို့ ခင်မင် တွေ့ချင်မိတဲ့ အစ်မပါ ..။
၁၀ ... ဦးနော်နဲ့ တီငယ်ပါ (နှစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် ) ဘလော့ခ်တစ်ခုထဲမို့ တစ်ယောက်အဖြစ်ပဲ သတ်မှတ်တာ ..
တီငယ့် စာတွေဆို အရမ်းကြိုက်တယ် .. စာတွေ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ခင်မင်မှုလေးတွေ ရတဲ့အခါ တီငယ်က သူရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကို မေးလ်ကနေ ပို့ပေးဖူးတယ် .. ပြီးတော့ စသိခါစတုန်းက ပို့စ်တွေ အကုန်မဖတ်ရသေးပဲ မေးမိတာ တစ်ခုအတွက် တီငယ်ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ရတာ မှတ်မိသေးတယ် .. ဟိ ..ပြီးတော့ ဦးနော် ကဗျာရွှတ်တဲ့ အသံ ...၊ နားထောင်ရပေမယ့် ဦးနော်မှန်း မသိတဲ့ အဖြစ် .. .. နားထဲမှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အသံအနေအထား ပီပြင်ပြောင်မြောက်အောင် ရွတ်ဆိုနိုင်တဲ့ ဦးနော် .. အရေးကောင်းတဲ့အတွက်ရော .. စသည်ဖြင့် အဲလိုအဲလိုတွေကြောင့် တွေ့ချင်ပါ၏ ...
ညီမလေး ပန်းခင်းရေ .... ခုမှပဲရေးပေးဖြစ်တာ နားလည်ပေးပါနော့ .... တော်သေးတယ် အကြွေးရှင်က မေ့နေတာ နေမယ် ..အကြွေးမတောင်းလို့ ...။ သတိရတုန်းလေး ရေးလိုက်တာ ... ဆက်ရေးရင် ဘလော့ခ်စာရင်းဝင် အကုန်ပါမှာ သေချာတယ် ..။တွေ့သာတွေ့ချင်တာ .. ၁၀ယောက်လုံးရဲ့ဘလော့ခ်တွေ နောက်ပိုင်း မဖတ်ဖြစ်တာ များနေပြီ .. စိတ်ဆိုးနဲ့နော် ..မအားလို့ပါ ..။နောက်များ မကြာမီ အိမ်တွေ ပြန်လည်လို့ စာဖတ်ဖြစ်တော့မှာပါ ..။ ခုတော့ ဘူးသီးနော် ..။
ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းများဆိုပြီး ပရော်စီကွေ့ခေါ် ဇောင်းက တက်ခ်ထားသည့်အတွက် လတ်တလော ညည်းဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေကို စိတ်ထဲက ညည်းရင်း ရေးလိုက်ပြီ ....။
၁ .. အာဇာနည် ( မင်းလေးတစ်ယောက် )
“အလွမ်းဆုံးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ ငါမင်းကိုမေ့ချင်လဲ ... သီချင်းလေးထဲအထိ မင်းရဲ့အကြောင်းတွေ ၀င်ဝင်လာတယ် ... အိပ်ပစ်လိုက်ဖို့ ဆေးတစ်ခွက် ငါသောက်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ် .. အိပ်မက်ထဲတောင် မင်းလေးရောက်နေဆဲ ...... မချစ်နဲ့ မချစ်နဲ့ လူတွေက မုန်းဖို့ပြောတယ် .. ကိုယ့်ရဲ့အနားမှာ မင်းမရှိပဲ ဘယ်လို နေနိုင်မလဲ .. အချစ်နဲ့ အမုန်းနဲ့ ဘယ်လိုများ ပြောင်းလဲရမယ် အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းပြချက် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ မင်းလေး တစ်ယောက်ထဲပဲ” .....။
၂ .. Gay Zar ( ဆန္ဒတစ်စုံတစ်ရာ )
“ချစ်တဲ့ မျက်ဝန်းလေး နှလုံးသားချင်းနားလည်ခဲ့ .. လျှို့ဝှက် သံယောဇဉ် ရင်ခုန်စွာ တမ်းတရင်း .. အို နေ့ရယ်
အို ညရယ် စိုးမိုးလို့ ထားခဲ့ပြီပေ့ါ ... မေ့မရ သူ့နှုတ်ခမ်းလေး နုညံ့တဲ့ မုန်းတိုင်းလေးလား” ....။
၃ .. cobra ( ရူးမတတ်ခံစား )
“မင်းကိုတွေ့တဲ့ နေ့ကစပြီး ရင်ခုန်သံတွေကို သံစဉ်ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲတတ်လာခဲ့တယ် .. တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါ့အနားကမင်း ပျောက်ဆုံးသွားမှာကို အရမ်းကြောက်နေလို့ ..... ငါရေးထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် နံရံပေါ်တွေ့လို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ မင်းအကြောင်းဖြစ်နေလို့” ....။
၄ .. ဒီလေး ( မင်းနားလည်မှာပါ )
“မလွမ်းပဲ မနေနိုင်အောင် မင်းလုပ်ခဲ့တယ် .... မချစ်ပဲ မနေနိုင်အောင် မင်းရဲ့ အပြုံးရယ် .. နှလုံးသားဒဏ်ရာတွေ မင်း မပေးပဲနဲ့ ရရှိခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ” ....။
၅ .. ဟန်ထွန်း ( အလွမ်းကဗျာရှည် )
“ အလွမ်း ... ကဗျာလေးပဲ ........ ကဗျာရှည်ဟာ မဆုံးဘူး ..... အနမ်းတစ်ခုလည်း ကြွေကျသွား ..... ကိုယ့်ရင်ထဲ .. အမြဲသိမ်းထား .... ရင်ခုန်သံကာရံလေးများ” ....။
၆ .. ဒီလေး ( မသိခြင်းများ )
“မယုံရင် ကိုယ့်ရင်ကိုဝင်ကြည့် မင်းမသိတဲ့ အချစ်တွေ ပြည့်ကြပ်လွန်းတဲ့ မင်းရဲ့အကြောင်းတွေ .. ဘယ်သူမှမသိ ကိုယ်တိုင်နားမလည်သော မင်းရဲ့စိတ်ကို အဖြေရှာခဲ့ ... ယုံပါချစ်သူလေး .. မင်းရဲ့အနီးအနားမှာ အရိပ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ နေခွင့်ရချင်တယ် .. ဆုတောင်းလဲ .. တစ်ကယ်ကို မပြည့်နိုင်ခဲ့ .. အချစ်နတ်ဘုရားရေ .. ဘယ်မှာလဲ .. ဟယ် ..အိုး.........ဟိုးးးးး” ....။
ညီငယ် .. ဇောင်း ..ရေ .. ရေးလိုက်ပြီနော် ..
နောင် အနှစ် (၂၀)
မောင်လေး ၀သန်မိုးက တတ်ဂ်ထားတာပါ တတ်ဂ်ထားတာလဲ ကြာနေပြီး သူများတွေလဲ ရေးပြီးကုန်ပြီး
မီးလေးလဲ ဘာရေးရမှန်းမသိသေးလို့ ခုမှပဲရေးရတော့တယ် ..... နည်းနည်းအပျင်းတစ်တာလဲပါတာပေါ့နော်
အမှန်တော့နောက်နှစ်(၂၀) မပြောနဲ့ မနက်ဖြန် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတောင် သိကြတာမှမဟုတ်တာနော်....
၀သန်ပြောသလို မီးလေးဇာတစ်ယောက် အမှန်တကယ်ပဲ ဒီဇိုင်နာကြီးဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော် စိတ်ကူးယဉ်လို့တော့ကောင်းသား......း)
ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ကြိုးစားရမှာပေါ့နော် လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပဲ ......
မမြင်တွေ့နိုင်သေးတဲ့ နောက်အနှစ်(၂၀)အတွင်းမှာ ချစ်တဲ့ကိုလတ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့
မိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ် လိုချင်တောင့်တပေမယ့် ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားရမှာတွေလဲအများကြီးရယ် ဒီလိုမိသားစုတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ကလဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ ကြိုးစားလို့ရတာမျိုး မဟုတ်တော့ ပုံသေတွက်ချက်လို့ မရနိုင်ဘူးလေနော်......
ဘယ်အရာကမှတည်မြဲတာမှ မဟုတ်ပဲလေ............. အပျိုကြီးပဲဖြစ်နေမလား ဟိဟိ သိမှမသိရတာလေနော်
စိတ်ကူးယဉ်တာ ပိုက်ဆံကုန်တာမှ မဟုတ်တာနော် များများသာယဉ်လိုက်....... ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေတွေး
စိတ်ချမ်းမြေ့နေရင် လူလဲလန်းဆန်းနေရော .... စိတ်ပျိုကိုယ်နုပေါ့နော့.း)
ဒီလောက်ပဲပေါ့နော် မောင်လေးဝသန်ရေ ကျေနပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
ကျန်းမာနေရင် ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ကြနော်
အဲ့ဒါနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မိတယ် ငါဘာဝါသနာပါလဲပေါ့
မီးလေးက ဒီနေရာလဲပါချင် ဟိုနေရာလဲပါချင်နဲ့ ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် လိုက်လုပ်ရတာကို ၀ါသနာပါတယ်
မီးလေးဇာဆိုတာ အဲ့လိုအဲ့လို ဟိဟိ စတာပါနော် ယုံနဲ့း)
အမှန်တော့မီးလေးက သီချင်းဆိုရတာဝါသနာပါတယ် ထမင်းဟင်းချက်ရင်လဲ သီချင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ လိုက်ဆိုရတာကြိုက်တယ် အမေကတော့ပြောတာပေါ့ ထမင်းဟင်းချက်ရင်းနဲ့ သီချင်းမဆိုရဘူး ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့ရတတ်တယ်တဲ့ မီးလေးကလဲ အဲ့လိုဆိုကောင်းတာပေါ့ ကြီးရင်မှီငယ်ရင်ချီလို့ ဟိဟိ
အမှန်တော့ သီချင်းဆိုရင်း ထမင်းဟင်းချက်ရင် တံတွေး တွေဟင်းအိုးထဲ ၀င်ကုန်မှာစိုးတာပါ...
အသံကဒီတိုင်းဆိုရင် သိပ်မသိသာပေမယ့် ကာရာအိုကေဆိုလိုက်တော့ အဖေကလာပြောတယ် မီးလေးရာ ရုပ်နဲ့နှိပ်စက်ရ တော်တော့ပေါ့တဲ့ အသံဆိုးနဲ့တော့ထပ်မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့တဲ့လေ အဲ့ဒါနဲ့ ကာရာအိုကေကို ဆိုကိုမဆိုဖြစ်တော့ဘူး ဘန်ကောက်ရောက်တော့ ၀ါသနာက မသေသေးဘူးလေ သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဂွမ်းသာစွပ်ထားကြဆိုပြီးတော့ အပြတ်ဟဲတာပေါ့ ဟိဟိ မီးလေးတို့မိသားတစ်စုလုံးက သီချင်းဆိုတာဝါသနာပါကြတယ်လေ မီးလေးက ပါးစပ်ထဲ တွေ့ကရာလျှောက်ဆိုတာ ညီမလေးဆိုအမြဲပြောရတယ် ဆိုနေတာ တစ်ခြားစီပဲတဲ့ မျက်စောင်းခဏခဏထိုးတယ်လေ............
ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတယ် ကင်မရာတစ်လုံးလက်ထဲရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ ရိုက်လိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေ
လှလှမလှလှ ရိုက်တာပဲ အိုက်တင်ကလဲ မျိုးစုံပေးတာ ရိုက်ပေးတဲ့သူတောင်မျက်စိမူးတယ် ကူးလိုက်ရတဲ့ ပုံတွေလဲ အိမ်မှာပုံလို့ ........ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတောင် သူငယ်ချင်းတွေက ပန်းပြပွဲမှာဓါတ်ပုံသွားရိုက်မယ်
လိုက်မလားလို့အဖော်စပ်သေးတယ် အလုပ်ကမနားတာနဲ့ မလိုက်သွားလိုက်ရဘူး သူငယ်ချင်းပြန်လာတော့ ဘယ်လိုလဲလို့မေးလိုက်တာ နင်သွားရင်သေချင်စော်တောင်နံသွားမယ်တဲ့ အယ် ..ဘာလို့လဲပေါ့
ပန်းတွေကအရမ်းလှပြီး လူတွေကရုပ်ဆိုးနေလို့ပေါ့ဟဲ့ ...တဲ့လေ.ဟိဟိ တော်သေးတာပေါ့ အီဖေကိုမပါသွားလို့ ခွိခွိ
နောက်တစ်ခုကတော့ ၀တ္ထုဖတ်တာ ၀ါသနာပါတယ် ကျောင်းစာတော့လုံးဝပဲနော် ကိုင်လိုက်တာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာ အဲ့လိုကြိုးစားတာ ညည၀တ္ထုဖတ်ချင်ရင် သချာင်္တွက်တယ် အိမ်စာလုပ်တယ်
အဲ့လိုမှဖတ်ရမယ်လေ စာကျက်ရင်တော့ ဘယ်ရမလဲနော် ဘာလို့ဆိုတော့ မီးလေးကစာကိုအော်ကျက်လို့ အမေတို့ဆို မီးလေးစာကျက်ရင်အနားမှာမနေဘူး အသံကိုနားထောင်တာ ပြောရရင်ရှည်နေဦးမယ်.....
ဒီသုံးမျိုးကတော့ ၀ါသနာအရမ်းပါတာပေါ့နော် မီးလေးတစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလို့ လုပ်ချင်ပြီးဆိုရင် အမေနဲ့အဖေ
ပြောနေကြစကားကတော့ မီးလေးတစ်ယောက် ဒီရေတတ်ပြန်ပြီးတဲ့ ဘယ်နေ့ဒီရေပြန်ကျမလဲမသိဘူးတဲ့ ဟီးးးးးးး အဲ့လိုဆို သိပြီးပေါ့နော် ခွိခွိ.....း)
၀ါသနာအကြောင်း ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဘာမှသေသေ ချာချာ မရှိဘဲ အားလုံးက စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ယောင်ဝါးဝါးပါပဲ။စာအုပ်စာပေတွေ ဖတ်တာအပြင် ကလေးဘ၀မှာ အကအခုန် ၀ါသနာပါတယ်။ သီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါတယ်။ နေ့ခင်းဘက် အိမ်မှာနေ တဲ့အခါ မိသားစုက နေပူထဲ အပြင်ပေးမထွက် မဆော့ခိုင်းတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို အိမ်ကိုခေါ်ဆော့တယ်။ ဆော့တော့လဲ ကတိုင်းခုန်တိုင်းပဲ။ ညပိုင်းရောက်တဲ့ အခါမှာလဲ သိတဲ့အတိုင်း ကလေးသဘာဝ ကလေးတွေ စုဝေးပြီး ညအခါ လသာသာမှာ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အုပ်စုလေး တွေဖွဲ့ပြီး နှစ်သက်ရာ ကစားကြတယ်။ ဆော့ပြီးမောရင် အခင်းလေးတွေ ခင်းပြီးအလှည့်ကျ ကကြ၊ ဆိုကြပါတယ်။အဲလိုအဆို၊ အက၊ အခုန် ၀ါသနာ ပါတော့ မိသားစု တွေက အက မင်းသမီးများ ဖြစ်သွားမလား လို့တောင်ထင်ခဲ့တယ်။ အခုအသက် ကြီးလာတော့ ကတယ်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင် သလိုပါပဲ အရမ်းကို တည်ငြိမ်ရင့် ကျက်သွားတယ်....အဟီးး....ကဖို့မပြောနဲ့ တွန့်တောင်မတွန့် ရဲတော့ဘူး။ :P
ကျောင်းတတ်လို့ အတန်းကြီးလာတော့ ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယို ကားတွေတအား ကြည့်ခဲ့တယ်။ တနေ့ကို ဗွီဒီယိုခွေ ငါးခွေခြောက်ခွေလောက်ကို မထတမ်း ကြည့်ခဲ့တာ။ ရုပ်ရှင်ရုံမှာလဲ တစ်ပတ်တခါ ကားသစ်လဲတိုင်း မပြတ်တမ်း သွားကြည့်နေကျ။ အဲဒီမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တွေလို အိုင်တင် အမျိုးမျိုးနဲ့ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်လိုက်သေးတယ်။ မသိရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ကြနေတာပဲ...အဟဲ....အဲဒီမှာ မင်းသမီးလုပ်ဖို့ကို ၀ါသနာ ပါသွားတာ။ အဲဒီအချိန် တုန်းကဆို မို့မို့မြင့်အောင်ခေတ်လေ။
မက်မက်က မို့မို့မြင့်အောင်ဆို အရမ်းကြိုက်တာ။ သူ့မကောင်းကြောင်း ပြောရင်ကို မကြိုက်ဘူး။ အဲလိုမကြိုက် မှန်းသိတော့ ကိုယ့်အကြောင်း သိတဲ့ သူတွေက နောက်ပြောင်ပြီး မမို့မကောင်းကြောင်း ပြောရင်ကို ပြောတဲ့သူနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြစ်လိုက်တာ။ကိုယ့်ကိုလဲ မမို့လို့ ခေါ်မှကြိုက်တာ။ အဲ့အချိန်က မမို့တို့က ဆံပင်အမောက်ထောင် စတိုင်လ်နဲ့ ဆိုတော့ မက်မက်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မို့မို့မြင့်အောင် စတိုင်လ်နဲ့ ကိုယ့်ဆံပင်ကို အမောက်ထောင်ထားတာ။ အဟား...အဲဒီတုန်းကတော့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး မင်းသမီးလုပ်ဖို့ အရမ်း ၀ါသနာပါပြီး တော်တော်ရူးခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် ကြီးလာတဲ့အခါ မင်းသမီးလုပ်ဖို့ မပြောနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက် တာတောင် ရှက်တတ်တယ်တော့။အဟီးးး ... :P
အထက်တန်း ရောက်လာတဲ့အခါ စစ်ဆေးရုံက စတိုင်လ်လှလှလေးနဲ့ စစ်ဗိုလ်မ အရမ်းဖြစ် ချင်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်နိုင်အောင်လည်း စတင်ကြိုး စားပါတယ်။စိတ်ကူးထဲမှာ အမြဲတမ်း စစ်ဆေးရုံက သူနာပြု ၀တ်ရုံလေး တွေဝတ်ပြီး နားကျပ်လေး ဂုတ်မှာချိတ်လို့ တစ်ယောက်ထဲ စိတ်ကူးတွေ အရမ်းယဉ်ခဲ့တယ်။လူကြီးတွေကတော့ ပြောပါတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ရင် တကယ်စစ်ဗိုလ်မ လုပ်မှာလားတဲ့။ ညည်းပုံစံနဲ့ ရှေ့တန်းထွက် ရတဲ့ဒဏ်၊ ပြီးတော့ စစ်မြေပြင်မှာ ရဲဘော်တွေ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရနေတဲ့အခါ သွေးတွေဘာတွေ နဲ့ကိုယ်အင်္ဂါ ပျက်စီးနေတဲ့ သူတွေကို ကိုင်တွယ်ပြု စုရမယ် ၊ အဲဒီဒုက္ခကို မခံနိုင် ဘူးဆိုရင်တော့ သေချာစဉ်းစား ပေါ့ဆိုပြီး ပြောတယ်။
နင်ရဲ့ရွံတတ်ပုံ၊ ကြောက်တတ်ပုံ နဲ့ဆို ဘယ်လိုလုပ် မလဲတဲ့ သေချာစဉ်းစားပါတဲ့။ နောက်ပြီး ကိုယ်ကစစ်ကားတွေ၊ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ကားတွေကြည့်တော့ လူကြီးတွေက ပြောတယ်၊ တကယ့်အပြင်မှာလဲ စစ်ဖြစ်ရင် အဲဒီအတိုင်းပဲတဲ့ ၊ နင်ထင်သလို လှလှပပ ကျော့ကျော့လေး မထင်နဲ့တဲ့။ အဲဒီမှာ တော်တော်ကြောက် သွားတယ်လေ။ ဒီတော့ ပြန်ပြီးစဉ်းစား သုံးသပ်တော့ အော်...ငါဝါသနာ ပါတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ အပေါ်ယံ အလှအပလေးနဲ့ ရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းထဲက စတိုင်လ်ခပ်မိမိနဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတာကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ၀တ်ရုံအလှ အပေါ်မှာ ငြိတွယ်မိတာကို။ အခုတော့ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တဲ့ အဲဒီဘ၀မှာ သူတို့တွေ လုပ်ကိုင်နေ ရတာကို ကြည့်ပြီးအရမ်းကို လေးစားမိတယ်။ အဲဒီလူတွေကိုလည်း အရမ်းကိုယ်ချင်းစာ မိပါတယ်။အဲဒါနဲ့ တဆက်ထဲ သိလိုက်ရတာက ကိုယ့်ဝါသနာဟာ စစ်ဆေးရုံက စစ်သူနာပြု လုပ်တဲ့အလုပ် မဟုတ်ဘဲ သူတို့ရဲ့ စတိုင်လ်ကျ ၀တ်ရုံလေးကို စွဲလမ်းပြီး ၀တ်ချင်လွန်းလို့ ၀ါသနာ လို့ထင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးယဉ် မှုလေးပါပဲ။
ကျောင်းတွေပိတ်တော့ အဖေက အင်္ဂလိပ် စကားပြော သင်ပေးတဲ့အခါ သူ့သားသမီး ဖြစ်တဲ့ မက်မက်တို့ကိုပါ သူ့တပည့်တွေနဲ့တစ်ဝိုင်းတည်း သင်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်ကအဲဒီ အချိန်တုန်းက ကလေးဆိုတော့ အဆော့မက်တယ်။ ကစားဖို့လောက်ပဲ အာရုံက ရှိနေတာပေါ ။အဖေက သူ့တပည့်တွေထက် သူ့သားသမီးကို ပိုတော်စေချင်တော့ တပည့်တွေ ရှေ့မှာဆို ဆူရင်ကိုယ့်ပဲ ဆူတယ် ၊ အဖေဆူတော့ စိတ်ကောက်တယ်။ စာသင်တော့ မယ်ဆိုရင် အကြောင်းတစ်ခုခု ပြပြီးပုန်း ရှောင်တော့တာပဲ။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် တွေမှာ သူ့တပည့်တွေ နဲ့အတူ အဖေ့ဆီမှာ စာသင်ကြ ရပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါ အပြင်က ဆရာတွေဆီမှာ လည်းလိုက်တတ် ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အဖေလောက်တောင် လေယူလေသိမ်း မကောင်းဘူး ဆိုတာ သိပေမယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ကို သွားအတူ လာအတူ စားအတူ သွားလာနေရတော့ ပျော်ပျော်ကြီးပဲ တတ်ခဲ့တယ်။ဒါကလဲ ခဏတာ လောက်လေးပါပဲ။
အဲဒီနောက်မှာ မြန်မာပြည်မှာ သာသနာ လာပြုနေတဲ့ ဘုံကျောင်းက ထိုင်ဝမ်တရုတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီး သူတို့ဆီ သွားလည်ရင်းနဲ့ စကားပြန် အစ်မကြီးတွေကို တော်တော်အား ကျခဲ့တယ်။ သူတို့လိုလဲ တရုတ်စကားကို သွက်လက်အောင် အရမ်းပြော ချင်ခဲ့တယ်။သူတို့လို အားကျပြီး စကားပြန် အရမ်းလုပ် ချင်ခဲ့တယ်။ ဆယ်တန်းဖြေပြီးတော့ အောင်စာရင်း မထွက်ခင်မှာ အပြင်သင်တန်းတွေ လိုက်တတ်ရင်း တရုတ်တန်း ၁၇လမ်းက ရွှေဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင် လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေ တဆင့် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ရလာတော့ ဘ၀တတ်လမ်း အခွင့်အရေးအရထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက လာဖွင့်တဲ့ ရွှေဆိုင်မှာ အလုပ်ပြောင်း လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီက စကားပြန် အစ်မကို အရမ်းအားကျခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဘ၀အတွက် လိုအပ်တဲ့ L.C.C.I Level 1,2,3 နဲ့ Computer စာရင်းကိုင်လဲ တက်လိုက်သေးတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ် တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ Marketing လည်းတက်လိုက် ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေ တက်သာတက် နေရတာ အဲဒီစာရင်း ဇယားတွေ ကိုင်တွယ်ရတာကို လုံးဝမကြိုက်၊ ၀ါသနာလည်း မပါခဲ့ဘူး။ တကယ်တမ်း သိလိုက်ရတာက မြုပ်ကွယ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာဟာ ဒီစာရင်းကိုင် မဟုတ်ဘဲ တဘက်သားကို နားလည်အောင်စကားပြန်ပေး ရခြင်းနဲ့ စာသင်ပေးရခြင်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီလို သင်တန်းတွေ တက်နေရင်းမှာပဲ အခါအခွင့် သင့်လာတော့ မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေး လာလုပ်ကြတဲ့တရုတ်ပြည်က တရုတ်လူမျိုး တွေဆီမှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူတူ စကားပြန် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ တရုတ်တွေဆီက ကိုယ်နားမလည် ကိုယ်မသိတဲ့ စကားကိုလဲ ပိုတတ်ကျွမ်းလာအောင် သင်ယူရင်းနဲ့ တစ်ဖက်ကလဲ အလုပ်သမားတွေကို ကိုယ်ဝါသနာ ပါတဲ့ စကားပြန် အလုပ်နဲ့ ဘာသာပြန် ပေးရပါတယ်။စက်ရုံမှာ ၀န်ထမ်းအားလုံးရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရော စက်ရုံတစ်ခုလုံးရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရော ကိုင်တွယ်ရတော့ကိုယ့်အတွက် အရာအားလုံးကို အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ သင်ယူခွင့်တွေ ရရှိလာတယ်။
အဲဒီအချိန်က အသက်က ၁၈ နှစ် ၁၉ နှစ်လောက်ပေါ့။ အသက်အရွယ် ငယ်ငယ်နဲ့ စကားပြန် မလေးကို အားလုံးက ချစ်ကြပါတယ်။သူဌေးပြီးရင် ကိုယ်ကအကြီးဆိုတော့ အားလုံးက ကြောက်လဲကြောက်၊ ချစ်လဲချစ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ကိုယ်က သူတို့တွေကို မိဘလို မိသားစုလို သံယောဇဉ် စေသနာ တွေနဲ့ လုပ်ကိုင်ပေး ခဲ့လို့နဲ့ တူပါတယ်။သူတို့ကလည်း အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားလို မဆက်ဆံပါဘူး။ ကိုယ့်ကို မိသားစုဝင် တစ်ယောက်လို တန်ဖိုးထားပြီး နေရာပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုလည်း သူတို့ယုံကြည် ကြပါတယ်။ကိုယ်ကလဲ သူတို့ကို ချစ်တယ်။ စေသနာ အပြည့်အ၀ ထားတယ်။ ကိုယ်ကလဲ သူတို့တွေ လူလိမ်မခံ ရအောင်လဲ တစ်ဖက်က သင်ပေးတယ်။ မြန်မာစကားက အစပေါ့။ကိုယ်ကသူ တို့ဆီက သင်ယူ ပြီးသူတို့က ကိုယ့်ဆီက သင်ယူနဲ့ပါပဲ။ အဲဒီလို စေသနာရဲ့ ရောင်ပြန် ဟပ်မှုကြောင့် တူပါတယ်။
သူတို့နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ဖို့လာသမျှ နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်တွေဟာ ၀န်ကြီးငှာနတွေမှာ ၀န်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှုမှာ တကယ့်ဘာသာပြန် ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေကို မခေါ်ယူပဲနဲ့ မက်မက်ကို အားကိုးပြီး တစ်ဖက်ကနေ စကားပြန်မှုမှာ ရဲဝင့်အောင်၊ သတ္တိရှိအောင်၊ ကျွမ်းကျင်အောင် ပံ့ပိုးလို့ မက်မက်ကိုပဲ သွားလေရာ ခေါ်ဆောင်ပြီး စကားပြန် ခိုင်းပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ မေတ္တာ၊ စေသနာ ဟာကိုယ်ရဲ့ ဘာသာခြား စကားတတ် မြောက်မှုမှာ မေ့မရတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ အခုထိလည်း မက်မက်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ တချိန်က ကိုယ့်အလုပ်ရှင် တွေကို မေ့မရပါဘူး။ အမြဲတမ်း သူတို့ရဲ့ ကျေးဇူးတရားတွေကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်ရင်း သူတို့သင် ပေးလိုက်တဲ့ ပညာနဲ့ ကိုယ်တတ်သလောက် သိသလောက်လေးကို ပြန်လည်ဝေမျှလို့ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ မက်မက်ရဲ့ အိမ်မှာပဲ ကလေးတွေကို ခေါ်ယူပြီး တရုတ်စာကို ၀ါသနာအရ အခမဲ့ ပြန်လည်သင်ပြ ပေးပါတယ်။
အခုစင်္ကာပူ နိုင်ငံကို ရောက်နေစဉ်မှာလဲ သူတစ်ပါးကို သင်ကြားပြသ ပေးချင်တဲ့ ၀ါသနာအရ ကိုယ်သိသလောက်ကို အခမဲ့ ပြန်လည် သင်ပြပေး နေပါတယ်။ဆရာမ အဖြစ်နဲ့ သူတို့ကို သင်ကြားပြသပေးရင်း ကိုယ်ကလဲ အသစ်တဖန် ပြန်လည်လေ့လာ မှတ်မိတာပေါ့။ ဘာသာရပ် တစ်ခုဟာ လေ့လာပြီးရင်ပြန်လည် အသုံးမချဘဲ ပြစ်ထားရင် မေ့လွယ်ကုန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မက်မက်ရဲ့ ၀ါသနာအရ အခုဆိုရင် ဆရာမ အဖြစ်နဲ့ကိုယ်သိသလောက် တတ်သလောက်လေးကို တပည့်တွေကို ပြန်လည်ဝေမျှ သင်ကြားပေးပါတယ်။
ကဲ...တီတီနက်နဲ့ ညီမဆုလေးတို့ရေ...မက်မက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ တုန်းကလို ကိုယ်လုပ်ကိုင် ခဲ့ရတဲ့ စကားပြန်အလုပ်ရယ် အခုစင်္ကာပူမှာ Sales&Marketing Executive ရာထူးနဲ့ လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ အလုပ်ရယ် ၊သူတစ်ပါးကို ဆရာအဖြစ်နဲ့ ကိုယ်သိတဲ့ ဘာသာစကားကို အခမဲ့ ပြန်လည်သင်ကြား ပြသပေးရတဲ့ အလုပ်ရယ် ဟာဆိုရင် မက်မက်အတွက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ တကယ့်ဝါသနာကြောင့် ဖြစ်တည်လာ ရတာတွေပါ။
အဲဒီလိုလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထင်မြင်ယုံကြည် မိပါတယ်။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ပညာရပ်တွေမှာ မိမ်ိရဲ့ ၀ါသနာနဲ့ လုပ်ကိုင်ပါမှ အောင်မြင်မှုကို ဆွတ်ခူးရရှိ ကြမှာပါ။ မည်သည့်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေပါစေ၊ မိမိရဲ့ ၀ါသနာကို အခြေပြုလို့ လုပ်ကိုင်ပါမှ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်မှာ ပျော်ရွှင်မှု အောင်မြင်မှု ကိုရရှိ ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်မက်လဲ ပင်ပန်းမှုဒဏ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တွေကို ကိုယ်ဝါသနာ ပါရာလုပ်ကိုင် ရတဲ့အတွက် အဲဒီက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပီတိတွေကို စားပြီး ပင်ပန်းမှုကို ဖြေဖျောက်လို့ ပျော်ရွှင်ကြည်နှုး ရပါတယ်။
မက်မက်ရဲ့ ၀ါသနာကတော့ အဲဒီလောက်ပါပဲ၊ တီတီနက်နဲ့ တီတီလိပ်ပြာလေးတို့ ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် ။ မက်မက်ကို ခင်မင်လို့ တက်ဂ်ထားတဲ့ အတွက်လဲ အစ်မနှင်းဆီနက်နဲ့ ညီမလေးဆုလေးတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မက်မက်ရဲ့ ၀ါသနာကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ စာဖတ်သူ အစ်ကို၊အစ်မ၊ ဦးဦး၊တီတီ တို့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အာဝါးးးးးးးးးနော်..
ကျွန်တော် ဂီတကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ၀ါသနာပါခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖေက Drum, Guitar , Keyboard, စန္ဒယား၊ ပတ္တလား ၊ဒုံမင်း များတီးတတ်သူဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် အဖေနှင့်နေစဉ်အတွင်း အဖေ့ဆီမှ Guitar နှင့် ပတ္တလားသာ အမွေရခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ညံ့လို့လဲ ဖြစ်ပါမည်။ ပြီးတော့ အဖေ့အိမ်မှ ခွဲခွာပြီး ရန်ကုန်တွင် ကျောင်းတက်လာရတော့လည်း အဖေ့ဆီက ပညာတွေနှင့် ဝေးကွာခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော် အိပ်ရာဝင်တိုင်း အဖေ အမြဲတမ်း ဒုံမင်းတီးကာ ချော့သိပ်လေ့ရှိသည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း သီချင်းတွေ ရေးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက ဂီတလက်သံနှင့် ရင်းနှီးခဲ့ရသည်။ ကိုတိုးကြီး(ခင်မောင်တိုး)၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ကိုင်ဇာ တို့မှာ ကျွန်တော် အလွန်ကြိုက်သော တေးသံရှင်များ ဖြစ်ကြပါ၏။ "ငါ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ဂီတလောကထဲမှာ တက်လမ်းရှိတာပဲ" ဆိုပြီး အိပ်မက်များ မက်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
သို့သော် ရန်ကုန်ရောက်ခဲ့တော့ လူ့တွေရဲ့ ကလိမ်ကျစ်ဥာဏ်များကို ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ပေါ် တစ်ယောက် ရသလောက် အမြတ်ကြီးစားလို့..........။ ဆရာခိုင်ကျော်နှင့် တွေ့ခဲ့ရစဉ် ကျွန်တော် ဆက်လက် သင်ယူခွင့်ရခဲ့သည်။ တစ်ပြိုင်တည်း ကံကောင်းခဲ့သလို တစ်ခါတည်းပင် သီချင်းများ လုပ်စားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ဆရာကတော့ ဒီလောကအကြောင်းတွေနှင့် ထိုးယှဉ်ကာ နှစ်သိမ့်ခဲ့၏။ ဒါက ကျွန်တော်၏ ဂီတအပေါ် ၀ါသနာ ပါခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန် ဂီတအပေါ်ဝါသနာပါသည်နှင့်ထပ်တူ စာရေးရသည်ကိုလည်း နှစ်ခြိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ပုံဖော် စရေးခဲ့သည့် ပထမဦးဆုံးမှာ "ငယ်ချစ်ဦး" ပင်ဖြစ်သည်။ အဲ့အချိန်က"ငယ်ချစ်ဦး"မှာ သီချင်းပင်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်မှ သီချင်းအား ဇာတ်လမ်းစတင် ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ယခု City FM တွင် ဇာတ်လမ်းသီချင်းများလိုပင် တူညီနေပေလားဟု ကျွန်တော် တွေးပြုံးမိသေးသည်။
ဆိုရသော်......... ကျွန်တော်အခုအချိန်ထိ ၀ါသနာပါသည့် နှစ်မျိုးစလုံးတွင် စာရေးခြင်းအလုပ်ကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေနိုင်ပြီး ထပ်တူကျနေသလို၊ ဂီတကိုတော့ ဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့...။ လူ့ဘ၀သည် ဤသို့ ဤသို့ပင် ဖြစ်ချေသည်ဟုသာ ဖြေသိမ့်ရသည်။ ကိုယ်ရပ်တည်နေသော အခြေအနေနှင့် ဂီတနယ်ပယ်မှာ ဝေးကွာနေရသည်။ ဘယ်လိုပင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဝါသနာပါရာနှစ်ခုတွင် တစ်ခုသောအရာကို လုပ်နိုင်နေ၍ ကျွန်တော် ၀မ်းသာမိသည်။
၀ါသနာနှင့် ဘ၀ ထပ်တူမကျသလို... ထပ်တူကျပြီးလုပ်နိုင်သော စာပေကိုသာ ဆက်လက်ရေးသား နေပါကြောင်း.....................။
ညီငယ် တေလေ က "ကျွန်တော် ၀ါသနာပါသည်"ဆိုပြီး Tag ထားပါတယ်... ကျွန်တော်လည်း အခုမှ ကျန်းမာရေး ကောင်းကောင်းချင်းရေးလိုက်ပါသည်။
လူတိုင်း လူတိုင်းတွင် ၀ါသနာပါရာ တစ်ခုစီတော့ ရှိစမြဲပင် ဖြစ်ပါ၏.. သို့အတွက်ကြောင့်ပင် ခင်မင်ရာ ဘလောဂ်ရေးသူများကို "Tag Game" အလို့ငှာ ထပ်မံကာ မောင်းတီးရပေဦးတော့မည်။
မနှင်းဆီနက် (ခရီးမသွားမီ အပြီးရေးရန်)(ရေးပြီး)